LokaChantha: February 2010
တပေါင်းလပြည့်နေ့ ဗုဒ္ဓ ဝန္ဒနာ (၃)
ဝိသုဒ္ဓမဗ္ဘ ဂဂနံ သုရမ္မံ၊
ဒိသာ စ သဗ္ဗာ အတိရောစယန္တိ၊
သမယော မဟာဝီရ အင်္ဂီရသာနံ။
ဘဒန္တေ = ကျေးဇူးငါးပုံ ကောင်းခြင်းဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံထင်ရှား ရှင်ပင်မြတ်ဘုရား …။
ဂဂနံ = အဇဋာပြင် မိုးကောင်းကင်သည်။
ဝိသုဒ္ဓမဗ္ဘံ = စင်ကြယ်သော တိမ်တိုက်ရှိသည်လည်း ဖြစ်၍။
သုရမ္မံ = နှလုံးမွေ့လျော် ပျော်ရွှင်ဖွယ်လည်း ဖြစ်ပေ၏။
မဏိမယေဟိ = မြကျောက်စီခြယ် ဆင်ယင်ဖွယ် တန်းဆာတို့ဖြင့်။
သမလင်္ကတာဝ = ကောင်းစွာပြုပြင် တန်းဆာဆင်အပ်ကုန်သကဲ့သို့။
သဗ္ဗာ ဒိသာ စ = အလုံးစုံသော အရပ်မျက်နှာတို့သည်လည်း။
အတိရောစယန္တိ = ရှုချင်စဖွယ် လွန်စွာ တင့်တယ်ကြကုန်၏။
မဟာဝီရ = ကြီးမြတ်သော ဝီရိယရှိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား …။
အင်္ဂီရသာနံ = ကိုယ်တော်မြတ်မှ မပြတ်ပြိုးပြက် တလက်လက်ဖြင့် ထွက်သော ရောင်ခြည်ရှိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားတို့၏။
သမယော = ဖွားရပ်ဌာနီ ပြည်ကပ္ပီသို့ နှစ်လီစက်ပန်း ကိုယ်တော်လှမ်း၍ ကြွမြန်းတော်မူရန် လျော်ကန်လျောက်ပတ် ကောင်းမြတ်သော အချိန်ပါဘုရား။
စရန္တိ တသ္မိံ ပဝနေ သုရမ္မေ၊
သုရမ္မေ = နှလုံးမွေ့လျော် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်သော။
တသ္မိံ ပဝနေ = ထိုရာဇဂြိုဟ်, ကပိလ နှစ်ဌာနခရီးလမ်း တောစခန်း၌။
ဂန္ဓဗ္ဗဝိဇ္ဇာဓရကိန္နရာ စ = ဂန္ဓဗ္ဗနတ်, ဝိဇ္ဇာဓိုရ်, ကိန္နရာတို့သည်လည်း။
မဓုရဿရေန = ချိုမြိန်လှစွာ သာယာသော အသံဖြင့်။
သုဂီတိယန္တာ = လေးတွဲ့သံချို ကောင်းစွာ သီဆိုကုန်လျက်။
စရန္တိ = လူးလာကျက်စား သွားလာကြကုန်၏။
တပဿိသံဃေဟိ နိသေဝိတံ ဝနံ။
ကိလေသသံဃဿ = နှိပ်စက်တတ်စွာ ကိလေသာအပေါင်းကို။
အဘိတာသကေဟိ = အလွန်ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့ကြကုန်သော။
တပဿိသံဃေဟိ = ရသေ့ရဟန်းအပေါင်းတို့သည်။
နိသေဝိတံ = အမြဲမပြတ် ကိန်းပျော် မှီဝဲအပ်သော။
ဝနံ = ရာဇဂြိုဟ်, ကပိလ နှစ်ဌာနခရီးလမ်း တောစခန်းသည်။
ဝိဟာရအာရာမသမိဒ္ဓိဘူတံ = နေထိုင်ဖို့ရန် ကျောင်းအရာမ်တို့ဖြင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ ဖြစ်၏။
သမိဒ္ဓိနာနာဖလိနော = ပြည့်ဝခိုင်ဖြီး အထူးထူးသော အသီးရှိကုန်သော။
ဝနန္တာ = တောအုပ်တို့သည်။
အနာကုလာ = နှောက်ယှက်ခြင်း ကင်းကုန်သည် ဖြစ်၍။
နိစ္စမနောဘိရမ္မာ = အမြဲတစေ နှလုံးမွေ့လျော်ဖွယ် ဖြစ်ကုန်၏။
ပထိကာနံ = ခရီးသွားသူ ရှင်ရှင်လူတို့၏။
သမာဓိပီတိံ = စိတ်တည်ကြည်ခြင်း နှစ်သက်ခြင်းကို။
အဘိဝဍ္ဎယန္တိ = အာရုံငါးသင်း ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းကြောင့် လွန်မင်းစွာ တိုးပွားစေနိုင်ကုန်၏။
နိသေဝိတံ နေကဒိဇေဟိ နိစ္စံ၊
ဂါမေန ဂါမံ သတတံ ဝသန္တာ။
ပုရေ ပုရေ ဂါမဝရာ စ သန္တိ၊
ဝနန္တံ = ရာဇဂြိုဟ်, ကပိလ နှစ်ဌာနခရီးလမ်း တောစခန်းကို။
အနေကဒိဇေဟိ = အမျိုးဇာတ်အား များစွာသော ငှက်အပေါင်းတို့သည်။
နိစ္စံ = အမြဲ။
နိသေဝိတံ = ပျော်ရွှင်မှီဝဲ သုံးစွဲအပ်ပေ၏။
ဂါမေန-ဂါမံ = တရွာမှ တရွာသို့။
သတတံ = အမြဲမပြတ်။
ဝသန္တာ = သဘောတူရာ ပြောင်း၍ စုပေါင်းတည်နေကြကုန်သော။
ဂါမဝရာ စ = စားကျေးရွာတို့သည်လည်း။
ပုရေ ပုရေ = မြို့တိုင်း မြို့တိုင်း၌။
သန္တိ = ရှိကြကုန်၏။
ဂန္ဓဉ္စ မာလဉ္စ ဝိလေပနဉ္စ။
တဟိံ သမိဒ္ဓါ ဇနတာ ဗဟူ စ၊
တဟိံ = ထိုလမ်းခရီးအကြား များပြားလှစွာ စားကျေးရွာတို့၌။
ဝတ္ထန္နပါနဉ္စ = ဝတ်ဖွယ်စားဖွယ် သောက်ဖွယ် အသွယ်သွယ်သည်၎င်း။
သယနာသနဉ္စ = အိပ်ရာ နေရာသည်၎င်း။
ဂန္ဓဉ္စ = အထုံအခိုး နံ့သာမျိုးသည်၎င်း။
မာလဉ္စ = ပန်းအမျိုးမျိုးသည်၎င်း။
ဝိလေပနဉ္စ = ရနံ့ကြိုင်လှောင်း နံ့သာပျောင်း (နံ့သာပျော့) အမျိုးမျိုးသည်၎င်း။
သမိဒ္ဓါ = စီးပွားဥစ္စာ ကြွယ်ဝစွာကုန်သော။
ဗဟူဇနတာ စ = သင်္ချာများတောင်း လူအပေါင်းတို့သည်၎င်း။
သန္တိ = ရှိပါကုန်၏။
သမယော = ဖွားရပ်ဌာနီ ပြည်ကပ္ပီသို့ နှစ်လီစက်ပန်း ကိုယ်တော်လှမ်း၍ ကြွမြန်းတော်မူရန် လျော်ကန်လျောက်ပတ် ကောင်းမြတ်သော အချိန်ပါ ဘုရား။
ဇနာ စ တသ္မိံ သုခိတာ သမိဒ္ဓါ။
ပဟူတဘောဂါ ဝိဝိဓာ ဝသန္တိ၊
တသ္မိံ = ထိုလမ်းခရီးအကြား များပြားလှစွာ စားကျေးရွာအပေါင်း၌။
ပုညိဒ္ဓိယာ = ကောင်းမှုပြည့်ဖြိုး ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့်။ (ဝါ) ဘုန်းတန်ခိုးကြောင့်။
သဗ္ဗယသဂ္ဂပတ္တာ = လုံးစုံမကြွင်း အခြံအရံများခြင်း ကျော်စောခြင်း အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ကုန်သော။
ဇနာ စ = ကုသိုလ်ကြီးမား လူအများတို့သည်လည်း။
သုခိတာ = ကာယစိတ္တ သုခနှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံကုန်လျက်။
ပဟူတ ဘောဂါ = သင်္ချာမြားမြောင် အသုံးအဆောင် ရှိကြကုန်လျက်။
ဝိဝိဓာ = အထူးထူး အပြားပြား။
ဝသန္တိ = နေထိုင်ကြကုန်၏။
နဘေ စ အဗ္ဘာ သုဝိသုဒ္ဓဝဏ္ဏာ၊
ဒိသာ စ စန္ဒော သုဝိရာဇိတောဝ။
ရတ္တိဉ္စ ဝါတော မုဒုသီတလော စ၊
ဘဒန္တေ = ကျေးဇူးငါးပုံ ကောင်းခြင်းဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံထင်ရှား ရှင်ပင်မြတ်ဘုရား ...။
နဘေ = အဇဋာပြင် မိုးကောင်းကင်၌။
အဗ္ဘာ စ = တိမ်တိုက်တို့သည်လည်း။
သုဝိသုဒ္ဓဝဏ္ဏာ = စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော အဆင်းရှိကုန်၏။
စန္ဒော စ = လမင်းသည်လည်း။
ဒိသာ = ဝန်းကျင်ပတ်ချာ အရပ်မျက်နှာတို့ကို။
သုဝိရာဇိတောဝ = တင့်တယ်စွာလှ ထွန်းတောက်ပ၏။
ရတ္တိဉ္စ = အကာလတာ ညဉ့်အခါ၌လည်း။
ဝါတော = ညှင်းညှင်းသာသာ တိုက်ခတ်လာသော လေသည်။
မုဒုသီတလော စ = ဆောင်းရာသီ၌ကဲ့သို့ မကြမ်းမှ နူးညံ့စွာ အေးမြပေ၏။
စန္ဒုဂ္ဂမေ သဗ္ဗဇနာ ပဟဋ္ဌာ၊
သကင်္ဂဏေ စိတြကထာ ဝဒန္တာ။
ပိယေဟိ သဒ္ဓိံ အဘိမောဒယန္တိ၊
စန္ဒုဂ္ဂမေ = စန်းငွေယုန်စက် ထွက်လတ်သောအခါ၌။
ပဟဋ္ဌာ = နှစ်သက်ရွှင်လန်း ဝမ်းမြောက်ကုန်သော။
သဗ္ဗဇနာ = မြေ၌နေသူ လူခပ်သိမ်းတို့သည်။
သကင်္ဂဏေ = လသာဆောင်တခွင် မိမိ မိမိတို့၏ အိမ်ကြမ်းပြင်၌။
စိတြကထာ = ဆန်းကြယ်သော စကားတို့ကို။
ဝဒန္တာ = ပြောဆိုကုန်လျက်။
ပိယေဟိ = ချစ်အပ်သော သူတို့နှင့်။
သဒ္ဓိံ = အတူတကွ။
အဘိမောဒယန္တိ = နှစ်လို့အားရမ်း ဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏။
စန္ဒဿ ရံသီဟိ နဘံ ဝိရောစိ၊
မဟီ စ သံသုဒ္ဓမနုညဝဏ္ဏာ။
ဒိသာ စ သဗ္ဗာ ပရိသုဒ္ဓရူပါ၊
စန္ဒဿ = လမင်း၏။
ရံသီဟိ = အေးမြချမ်းကြည် စန်းရောင်ခြည်တို့ဖြင့်။
နဘံ = အဇဋာပြင် မိုးကောင်းကင်သည်။
ဝိရောစိ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ် တောက်ပပါ၏။
မဟီ စ = မြေအပြင်သည်လည်း။
သံသုဒ္ဓမနုညဝဏ္ဏာ = စင်ကြယ်သန့်ရှင်း နှစ်သက်ဖွယ် အဆင်း ရှိပါ၏။
သဗ္ဗာ ဒိသာ စ = ဝန်းကျင်ပတ်ချာ အလုံးစုံသော အရပ်မျက်နှာတို့သည်လည်း။
ပရိသုဒ္ဓရူပါ = စင်ကြယ် သန့်ရှင်းသော သဘောရှိကုန်၏။
ဒူရေ စ ဒိသွာ ဝရစန္ဒရံသိံ၊
ပုပ္ဖိံသု ပုပ္ဖါနိ မဟီတလသ္မိံ။
ဂန္ဓဂုဏတ္ထိကာနံ = ရနံ့စုကို အလိုရှိသူတို့အကျိုးငှါ။
သမန္တတော = ထက်ဝန်းကျင်မှ။
မဟီတလေ = မြေအပြင်၌။
ပုပ္ဖါနိ = ပန်းအမျိုးမျိုးတို့သည်။
ဒူရေ စ = ခရီးယူဇနာ ဝေးကွာသော အရပ်၌သာလျှင်။
(ဌိတံ = တည်သော၊ ထည့်)
ဝရစန္ဒရံသိံ = ကောင်းမြတ်ထွန်းပြောင် စန်းလရောင်ကို။
ဒိသွာ = ပဏာပေါင်းဆုံ ကြိုက်ကြုံရသောကြောင့်။
ပုပ္ဖိံသု = ကားကားစွင့်စွင့် ပွင့်ကြလေကုန်ပြီ။
စန္ဒဿ ရံသီဟိ ဝိလိမ္ပိတာဝ၊
မဟီ သမန္တာ ကုသုမေန’လင်္ကတာ။
မဟီ = မြေအပြင်သည။
ရံသီဟိ = အေးမြချမ်းကြည် စန်းရောင်ခြည်တို့ဖြင့်။
ဝိလိမ္ပိတာဝ = တင့်တယ်စေရန် လိမ်းကျံအပ်သကဲ့သို့။
သမန္တာ = ထက်ဝန်းကျင်မှ။
ကုသုမေန = ညဉ့်၌ပွင့်ဆန်း ပန်းအမျိုးမျိုးဖြင့်။
အလင်္ကတာ = အလှပြုပြင် တန်းဆာဆင်အပ်သည်ဖြစ်၍။
သဗ္ဗင်္ဂသုမာလိနီဝ = အင်္ဂါကြီးငယ် အသွယ်သွယ်၌ တင့်တယ်စေကြောင်း ပန်းပေါင်းစုံလင် ပန်ဆင်အပ်သော အမျိုးသမီးကဲ့သို့။
ဝိရောစိ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ်လှပါ၏။
ကုစန္တိ တတ္ထီပိ မဒေန မတ္တာ၊
ဝိစိတ္တပိဉ္ဆာ စ ဒိဇာ သမန္တာ။
ကရောန္တိ နာဒံ ပဝနေ သုရမ္မေ၊
ဘဒန္တေ = ကျေးဇူးငါးပုံ ကောင်းခြင်းဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံထင်ရှား ရှင်ပင်မြတ်ဘုရား …။
သုရမ္မေ = နှလုံးမွေ့လျော် ပျော်ဖွယ်ရာရှိသော။
ပဝနေ = ရာဇဂြိုဟ်, ကပိလ နှစ်ဌာနခရီးလမ်း တောစခန်း၌။
ဟတ္ထီပိ = ဆင်တို့သည်လည်း။
မဒေန = အမုန်ဖြင့်။
မတ္တာ = ယစ်ကုန်သည်ဖြစ်၍။
ကုစန္တိ = ကြိုးကြာသံကဲ့သို့ အသံမူကုန်၏။
ဝိစိတ္တဝိဉ္ဆာ = အံ့ဖွယ်ဘနန်း ဆန်းကြယ်သော အတောင်ရှိကုန်သော။
ဒိဇာ စ = နှစ်ကြိမ်ဖွားတောင်း ငှက်အပေါင်းတို့သည်လည်း။
သမန္တာ = ဝန်းကျင်ပတ်ချာ ရပ်မျက်နှာမှ။
နာဒံ = ဝမ်းသာရွှင်မြူး တွန်ကျူးသော အသံကို။
ကရောန္တိ = ပြုကုန်၏။
ပထဉ္စ သဗ္ဗံ ပဋိပဇ္ဇနက္ခမံ၊
ဣဒ္ဓံ စ ရဋ္ဌံ သဓနံ သဘောဂံ။
သဗ္ဗံ = အလုံးစုံသော။
ပထဉ္စ = သွားရန်စခန်း ခရီးလမ်းသည်လည်း။
ပဋိပဇ္ဇနက္ခမံ = ဆောင်းကိုလွန်မြောက် နွေဦးပေါက်၍ သွားရောက်ခြင်းငှါ ခံ့လှစွာ၏။
ရဋ္ဌံ စ = တိုင်းပြည်ခရိုင် နိုင်ငံများသည်လည်း။
ဣဒ္ဓံ = ပြည့်စုံ၏။
သဓနံ = ဥစ္စာစီးပွား ပေါများလှ၏။
သဘောဂံ = သုံးဖွယ်ကုံလုံ ပြည့်စုံလှပါ၏။
သဗ္ဗတ္ထုတံ = အင်္ဂါခုနစ်ပုံ လုံးစုံပြည့်လတ် ချီးမွမ်းအပ်ပါ၏။
သဗ္ဗသုခပ္ပဒါနံ = ကာယ စိတ္တ သုခနှစ်ပုံ အလုံးစုံသော ချမ်းသာကို ပေးတတ်စွာ၏။
ဝနဉ္စ သဗ္ဗံ သုဝိစိတ္တရူပံ၊
ယတီန ပီတိံ သတတံ ဇနေတိ၊
ဝနဉ္စ = သွားရမည့်လမ်း တောစခန်းသည်လည်း။
သုမာပိတံ = နတ်တို့၏ကံ စီမံဖန်ဆင်းအပ်သော။
နန္ဒကာနနံဝ = နန္ဒဝန်ခေါ်တွင် နတ်ဥယျာဉ်ကဲ့သို့။
သုဝိစိတ္တရူပံ = ရှုချင်စဖွယ် လွန်စွာ ဆန်းကြယ်သော သဘောရှိပါ၏။
ယတီနံ = တောရပ်စခန်း ခရီးသွားရဟန်းတို့၏။
ပီတိံ = အာရုံငါးပါးမဖက် တောနှင့်စပ်သော နှစ်သက်ခြင်းကို။
သတတံ ဇနေတိ = အမြဲမပြတ် ဖြစ်စေတတ်ပါ၏။
အလင်္ကတံ ဒေဝပုရံဝ ရမ္မံ၊
ကပီလဝတ္ထုံ ဣတိ နာမဓေယျံ။
ကုလနဂရံ ဣဓ သဿိရိကံ၊
ဣဓ = ဤလောက၌။
သဿိရိကံ = အသရေရှိသော။
ကပိလဝတ္ထုံ ဣတိ နာမဓေယျံ = ကပိလရသေ့ ပျော်စံမွေ့သည့် မြေ့-သီခရာ သင်္ခမ်းရာဝယ် မြို့ရွာတည်လတ် ယင်းဗျုပ္ပတ်ကြောင့် အနွတ္ထဘွဲ့ချည် ကပိလဝတ်ဟူသော အမည်ရှိသော။
ကုလနဂရံ = ခမည်းနတ်ကျော် မြတ်မယ်တော်နှင့် ဆွေတော်ရှစ်သောင်း မျိုးတော်ပေါင်းတို့ ကိန်းအောင်းစံပျော် နေပြည်တော်သည်။
အလင်္ကတံ = အလှပြုပြင် တန်းဆာဆင်အပ်သော။
ဒေဝပုရံဝ = နတ်တို့စံရာ တာဝတိံသာကဲ့သို့။
ရမ္မံ = နှလုံးရွှင်ပျော် မွေ့လျော်ဖွယ် ရှိပါပေ၏။
သမယော = ဖွားရပ်ဌာနီ ပြည်ကပ္ပီသို့ နှစ်လီစက်ပန်း ကိုယ်တော်လှမ်း၍ ကြွမြန်းတော်မူရန် လျော်ကန်လျောက်ပတ် ကောင်းမြတ်သော အချိန်ပါ ဘုရား။ (ဤဂါထာမှ စ၍ ကပိလဝတ်နေပြည်တော်ကို ဖွဲ့ဆို ချီးလျှောက်သည်။)
ဝိစိတ္တပရိခါဟိ ပုရံ သုရမ္မံ၊
ပုရံ = ကပိလဝတ်တွင်ခေါ် နေပြည်တော်သည်။
မနုညအဋ္ဋာလဝိစိတ္တ ရူပံ = စိတ်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိသော ပြအိုးတန်ဆောင်းတို့ဖြင့် ဆန်းကြယ်သော သဘော ရှိပါ၏။
သုဖုလ္လပင်္ကေရုဟသဏ္ဍမဏ္ဍိတံ = ငွါးငွါးစွင့်စွင့် ကားကားပွင့်သော ကြာတောတို့ဖြင့် သာမောတင့်လွင် တန်းဆာဆင်အပ်ပါ၏။
ဝိစိတ္တပရိခါဟိ = ဆန်းကြယ်ဘိတောင်း ကျုံးမြောင်းတို့ဖြင့်။
သုရမ္မံ = လွန်စွာမွေ့လျော် ပျော်ဖွယ်ရာ ရှိပါ၏။
ဝိစိတ္တပါကာရဉ္စ = ရှုချင်စဖွယ် ဆန်းကြယ်သော မြို့တံတိုင်းလည်း ရှိပါ၏။
တောရဏဉ္စ = ကြံ့ကြံ့တည်ခိုင် တုရိုဏ်တိုင်လည်း ရှိပါ၏။
သုဘင်္ဂဏံ = စည်မျက်နှာအသွင် တင့်တယ်သော မြေအပြင် ရှိသည်ဖြစ်၍။
ဒေဝနိဝါသဘူတံ = သမ္မုတိနတ် ဥက္ကဌ်နွယ်ရင်း လူမင်းတို့၏ စံနေရာ ဖြစ်၍လည်း ဖြစ်၏။
မနုညဝီထိစ = စိတ်နှစ်သက်ဖွယ် ပြန့်ကျယ်သန့်ရှင်းသော လမ်းခရီးလည်း ရှိ၏။
သုရလောကသန္နိတံ = နတ်တို့စံရာ တာဝတိံသာနတ်ပြည်နှင့်လည်း တူ၏။
သုရိန္ဒလောကေ ဣဝ ဒေဝပုတ္တာ၊
ပုရေ = ကပိလဝတ်တွင်ခေါ် နေပြည်တော်၌။
သာကိယ ရာဇပုတ္တာ = မဟာနွယ်ဖွား သာကီဝင် မင်းသားတို့သည်။
ဝရဘူသနေဟိ = မြတ်သော အဆင်တန်းဆာတို့ဖြင့်။
အလင်္ကတာ = အလှပြုပြင် တန်းဆာဆင်အပ်ကုန်သည် ဖြစ်၍။
သုရိန္ဒလောကေ = နတ်တို့သနင်း သိကြားမင်းစံရာ တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌။
ဒေဝပုတ္တာ ဣဝ = နတ်ဝတ်တန်းဆာ ကောင်းစွာဆင်ထား နတ်သားတို့ကဲ့သို့။
ဝိရာဇမာနာ = ရှုချင်စဖွယ် အလွန် တင့်တယ်ကြကုန်၏။
သုဒ္ဓေါဒနော မုနိဝရံ အဘိဒဿနာယ၊
အမစ္စပုတ္တေ ဒသဓာ အပေသယိ။
ဗလေန သဒ္ဓိံ မဟတာ မုနိန္ဒ၊
မုနိန္ဒ = မုနိငါးမျိုး ခေါင်ကမိုး၍ အစိုးရသခင် မြတ်ရှင်ပင်ဘုရား …။
သုဒ္ဓေါဒနော = မွေးဖနတ်ကျော် ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးသည်။
မုနိဝရံ = မုနိဥက္ကဌ် ရဟန်းမြတ် ဖြစ်တော်မူသော အရှင်ဘုရားကို။
အဘိဒဿနာယ = ကွဲကွာသည်လည်း ကြာမြင့်၊ အသက်အရွယ်ကလည်း ကြီးရင့်၍ ရှင်ပင့်မျက်နှာ စန်းသော်မာကို သဒ္ဓါကော်ရော် ဖူးမြော်ခြင်းငှါ။
အမစ္စပုတ္တေ = အမတ်သားတို့ကို။
ဒသဓာ = ဆယ်ကြိမ်ဆယ်စု ဆယ်ဖို့ပြု၍။
မဟတာ = တထောင် တထောင် မြားမြောင်လှစွာသော။
ဗလေန = ဗိုလ်ပါအပေါင်းနှင့်။
သဒ္ဓိံ = တကွ။
အပေသယိ = ရှင်တော်ထံမှောက် ပင့်လျှောက်စေလွှတ်ခဲ့လေပြီ။
နေဝါဂတံ ပဿတိ နေဝ ဝါစံ၊
အာဂတံ = ရှင်စောမြတ်စွာ ကြွလာတော်မူသည်ကို။
နေဝ ပဿတိ = မဖူးမြင်ရရှာပါ။
ဝါစံ = ကြွလာလိမ့်မည် မလာမည်ဟု နှစ်လီကွဲပြား သတင်းစကားကိုမျှလည်း။
နေဝ သုဏာတိ = မကြားရရှာပါ။
သောကာဘိဘူတံ = သောကလောင်မီး ဖိစီးနှိပ်စက်အပ်သော။
နရဝီရသေဋ္ဌံ = ရဲရင့်သသူ ထိုထိုလူတို့ထက် မြတ်သော။
နရာဓိပတ္တံ = လူတို့သနင်း ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးကို။
တောသေတုံ = ရှင်တော့်မျက်နှာ ဖူးရပါ၍ အာသာပြည့်ဝ အားရနှစ်သိမ့်စေခြင်းငှါ။
(အဟံ = အကျွန်ုပ် ကာဠုဒါယီသည်။)
ဣစ္ဆာမိ = တောင့်တလင့်ဆို အလိုရှိပါ၏။
တောသေဟိ တံ မုနိန္ဒ ဂုဏသေဋ္ဌံ၊
(ပိတုနော = မွေးဖနတ်ကျော် ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးအား၊ ထည့်)။
တံ သဿနေန = အရှင်ဘုရားကို မျက်ဝါးထင်ထင် ဖူးမြင်ရခြင်းဖြင့်၊ (ဝါ) ဖူးမြင်ရခြင်းကြောင့်။
အဗ္ဘုတပီတိရာသိ = မဖြစ်စဖူး ထူးကဲသော နှစ်သက်ခြင်း အစုသည်။
(ဘဝေယျ = ဧကန်စင်စစ် ဖြစ်လေရာပါ၏၊ ထည့်)။
ဥဒိက္ခမာနံ = ရှင်တော်ဘုန်းပွင့် ကြွလာခွင့်ကို မြော်လင့်ကာနေသော။
ဒွိပဒါနမိန္ဒံ = အခြေနှစ်ချောင်းရှိသူ လူတို့ကို အစိုးရသော။
ဂုဏသေဋ္ဌံ = ကျွေးမွေးခဲ့ဖူး ဂုဏ်ကျေးဇူးဖြင့် အထူးမြင့်မြတ် ချီးမွမ်းအပ်သော။
တံ = ထိုမွေးဖနတ်ကျော် ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးကို။
(တွံ = အရှင်ဘုရားသည်၊ ထည့်)။
တောသေဟိ = ရှင်တော့်မျက်နှာ ဖူးရပါ၍ အာသာပြည့်ဝ အားရနှစ်သိမ့်စေတော်မူပါလော့။
အာသာယ ကဿတေ ခေတ္တံ၊
ဗီဇံ အာသာယ ဝပ္ပတိ။
အာသာယ ဝါဏိဇာ ယန္တိ၊
ယာယ အာသာယ တိဋ္ဌာမိ၊
သာ မေ အာသာ သမိဇ္ဈတု။
ကဿကော = တောင်သူယောက်ျား လယ်သမားသည်။
အာသာယ = ကောက်ပဲသီးနှံ ရရန်စိတ်ထား လိုလားတောင့်တခြင်းကြောင့်။
ခေတ္တံ = လယ်ယာကို။
ကဿတေ = ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် အဖန်ဖန် ထွန်ယက်၏။
(ကသိတွာ = ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် အဖန်ဖန် ထွန်ယက်ပြီး၍၊ ထည့်)။
အာသာယ = ကောက်ပဲသီးနှံ ရရန်စိတ်ထား လိုလားတောင့်တခြင်းကြောင့်။
ဗီဇံ = မျိုးစေ့ကို။
ဝပ္ပတိ = ထကြွလုံ့လ ဝီရိယဖြင့် ကြဲချစိုက်ပျိုး၏။
ဓနဟာရကာ = ဥစ္စာကို ဆောင်ကုန်သော။
ဝါဏိဇာ = ကုန်သည်တို့သည်။
အာသာယ = မြတ်စွန်းလိုငြား တောင့်တချက်တရားကြောင့်။
သမုဒ္ဒံ = ငါးလိပ်မကာရ်း ဘေးဘျမ်းတို့ ရောပြွမ်းထူစွာ သမုဒြာကို။
ယန္တိ = လှေသဘောင်္ကြီး အသီးသီးဖြင့် ခရီးဖြန့်မြန်း သက်စွန့်ကြိုးပမ်း ကူးသန်းသွားလာကြကုန်၏။
(တထေဝ = ထို့အတူပင်လျှင်။ အဟမ္ပိ = ဖွားဘက်တော်သမုတ် အကျွန်ုပ် ကာဠုဒါယီသည်လည်း၊ ထည့်)။
ယာယအာသာယ = နေပြည်တော်ဟောင်း ကြွစေကြောင်းဟု ကောင်းသောဆန္ဒ အကြင်သို့သော တောင့်တခြင်းဖြင့်။
(ဣဓ = ဤဝေဠုဝန်ခေါ် မင်းကျောင်းတော်၌၊ ထည့်)။
တိဋ္ဌာမိ = ရှင်တော့်ထံမှောက် ဆိုက်ရောက်ရပ်တည်လာပါ၏။
မေ = ဖွားဘက်တော်သမုတ် အကျွန်ုပ် ကာဠုဒါယီ၏။
သာ အာသာ = ဆွေထံမျိုးထံ ကိုယ်တော်ပြန်၍ အဖူးမြော်ခံစေလိုသော သမ္မာဆန္ဒ ထိုတောင့်တချက်သည်။
သမိဇ္ဈတု = တောင့်တသည့်အတိုင်း မဆိုင်းကုံလုံ ပြည့်စုံပါစေသတည်း။
သဒ္ဒလာ ဟရိတာ ဘူမိ၊
ဧသ ကာလော မဟာမုနိ။
မဟာမုနိ = မုနိဥက္ကဌ် ရဟန်းမြတ်ဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား ...။
ဣဒံ = ဆောင်းနှောင်းနွေဦး ဤအခါထူးသည်။
နာတိသီတံ = အေးလည်းမအေးလွန်းလှပါ ဘုရား။
နာတိဥဏှံ = ပူလည်း မပူလွန်းလှပါ ဘုရား။
နာတိဒုဗ္ဘိက္ခဆာတကံ = ကောက်ပဲသိမ်းစ ဥတုမျှ၍ အာဟာရမွတ်ရှား ခေါင်းပါးခြင်း ဆာလောင်ခြင်းမှလည်း ကင်းရှင်းပါ၏ ဘုရား။
ဘူမိ = မြေအပြင်သည်။
သဒ္ဒလာ = နေဇာမြက်ညွန့် ရှိသည်ဖြစ်၍။
ဟရိတာ = မြအရောင်သန်း စိမ်းလန်းစိုပြေလှပါ၏ ဘုရား။
ဧသ-ဧသော = ဆောင်းနှောင်းနွေဦး ဤအခါထူးသည်။
ကာလော = ဖွားရပ်ဌာနီ ပြည်ကပ္ပီသို့ နှစ်လီစက်ပန်း ကိုယ်တော်လှမ်း၍ ကြွမြန်းတော်မူရန် လျော်ကန်လျောက်ပတ် ကောင်းမြတ်သော အချိန်ပါ ဘုရား။
ဤသို့လျှင် ကာဠုဒါယီမထေရ်သည် ထူးထွေဆန်းကြယ် ဂါထာခြောက်ဆယ်တို့ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားသခင် ကပိလဝတ်နေပြည်တော်သို့ ကြွရောက်တော်မူရန် ချီးမွမ်းစကား လျှောက်ထားလေ၏။
(ဤ၌ အရှင်ကာဠုဒါယီ လျှောက်ဆိုသော ဂါထာတို့မှာ ၆၄ ဂါထာပင်ဖြစ်သော်လည်း အဋ္ဌသာလိနီမူလဋီကာ၌ ကိလေသာကို ရေတွက်သောအရာ၌ကဲ့သို့ အနည်းငယ် ၄-ဂါထာမျှ ပိုလွန်စေကာမူ “အပ္ပကံ ဟိ ဦနံ အဓိကံ ဝါ ဂဏနူပဂံ န ဟောတိ = အနည်းငယ်မျှ လိုသောအရာ ပိုသောအရာသည် မရေတွက်လောက်”ဟူသော ကျမ်းလာစကားအတိုင်း ဂါထာခြောက်ဆယ်ဟူ၍သာလျှင် အဋ္ဌကထာ ဋီကာတို့၌ ခေါ်ဆိုသုံးစွဲလေသည်ကို အထူး မှတ်ယူရာ၏။)
ထိုသို့ ကာဠုဒါယီမထေရ်မြတ် လျှောက်ဆိုလတ်သောအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ကာဠုဒါယီမထေရ်ကို “ချစ်သား ကာဠုဒါယီ ... သင် ချစ်သားသည် အဘယ်အကြောင်းကြောင့် ချိမြိန်သာယာသော အသံဖြင့် ကပိလဝတ်ပြည်သို့ သွားရောက်ရန် ချီးမွမ်းစကား လျှောက်ထားပြောဆိုသနည်း”ဟု မေးမြန်းတော်မူလေသော် အရှင်ကာဠုဒါယီမထေရ်သည် “ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာရား .... အရှင်ဘုရားတို့ကို ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒန မင်းတရားကြီးသည် ဖူးမြော်လိုလှပါပြီ။ ဆွေတော် မျိုးတော်တို့အား သင်္ဂြိုဟ်ချီးမြှောက်မှု ပြုတော်မူပါကုန် ဘုရား” ဟူ၍ လျှောက်ထားလေ၏။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက အရှင်ကာဠုဒါယီမထေရ်ကို “ကောင်းပြီ ချစ်သား ကာဠုဒါယီ ... ငါဘုရားသည် ဆွေတော် မျိုးတော်တို့အား သင်္ဂြိုဟ်ချီးမြှောက်မှု ပြုပေအံ့။ ရဟန်းသံဃာအပေါင်းအား ထိုအကြောင်းကို လျှောက်ကြားလော့။ ရဟန်းများသည် ခရီးသွားရဟန်းတို့ ပြုကျင့်ရမည့် ဝတ်တရားစုကို ပြုကြပေလိမ့်မည်” ဟူ၍ မိန့်ကြားတော်မူလေသော် “ကောင်းပါပြီ ရှင်တော်ဘုရား”ဟု ဝန်ခံပြီးလျှင် ကာဠုဒါယီမထေရ်သည် ရဟန္တာပေါင်း ထေရ်နှစ်သောင်းတို့အား ထိုအကြောင်းကို လျှောက်ထားလေ၏။
(ကာဠုဒါယီမထေရ်မြတ် ဂါထာခြောက်ဆယ်တို့ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားကို ကပိလဝတ် နေပြည်တော်သို့ ကြွရောက်ရန် ပင့်လျှောက်ခဏ်း ပြီး၏။)
(မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ “မဟာဗုဒ္ဓဝင်” မှ)
အဟံ ဝန္ဒာမိ သာဒရံ။”
အရဟံ = ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော။
သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ = တရားဥဿုံ အလုံးစုံကို အကုန်အစင် ထိုးထွင်း သိမြင်တော်မူပေသော၊
(ခမည်းတော်နှင့် ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ရှိရာ ကပိလဝတ်နေပြည်တော်သို့ ကြွမြန်းတော်မူရန် ဤတပေါင်းလပြည့်အခါသမယ၌ အရှင်ကာဠုဒါယီမထေရ်၏ စိတ်နှလုံးမွေ့လျော်ဖွယ် ခြောက်ဆယ်သော ဂါထာတို့ဖြင့် ဦးတင်လျှောက်ထားခြင်းကို ခံယူတော်မူရသော မြတ်စွာဘုရားရှင်အား။)
အဟံ = ဘုရားတပည့်တော်သည်။
သာဒရံ = ရိုသေမြတ်နိုး လက်စုံမိုး၍။
ဝန္ဒာမိ = ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏ အရှင်ဘုရား ...။
Posted by LokaChantha at 11:16 PM No comments:
တပေါင်းလပြည့်နေ့ ဗုဒ္ဓ ဝန္ဒနာ (၂)
မနုညဘူတာ စ မဟီ သမန္တာ၊
ဝိရာဇမာနာ ဟရိတာဝ သဒ္ဒလာ။
မဟီ = မြေအပြင်သည်။
မနုညဘူတာ စ = စိတ်နှလုံးဝယ် နှစ်သက်ဖွယ်လည်း ရှိပေ၏။
သဒ္ဒလာ = နေဇာမြက်တို့သည်။
ဟရိတာ = စိမ်းလမ်းစိုပြေကုန်သည်ဖြစ်၍။
ဝိရာဇမာနာ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ်လှကုန်၏။
သုပုပ္ဖိရုက္ခာ = ကောင်းစွာပွင့်သော သစ်ပင်တို့သည်။
မောဠိနိဝ = အပျိုနုနယ် ဆံထုံးသွယ်ကဲ့သို့။
အလင်္ကတာ = တန်းဆာဆင်ကြကုန်၏။ (ဤကား ရှေးနိသျှအဆို)
ဝိရာဇမာနာ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ်သည်ဖြစ်၍။
ဟရိတာဝ = စိမ်းသောအရောင် ရှိသည်ဖြစ်၍သာလျှင်။
သဒ္ဒလာ စ = နေဇာမြက်တို့ဖြင့်လည်း ဖုံးအုပ်လျက် ရှိပေ၏။
အလင်္ကတာ = လှပစွာ ပြုပြင် တန်းဆာဆင်အပ်သော။
မောဠိနိဝ = ဆံထုံးတင့်တယ် သတို့သမီးငယ်ကဲ့သို့။
သုပုပ္ဖိရုက္ခာ = ကားကားစွင့်စွင့် ကောင်းစွာပွင့်သော သစ်ပင် ရှိပေ၏။
အင်္ဂီရသာနံ = ကိုယ်တော်မြတ်မှ မပြတ်ပြိုးပြက် တလက်လက်ဖြင့် ထွက်သောရောင်ခြည် ရှိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားတို့၏။
သုသဇ္ဇိတာ မုတ္တမယာဝ ဝါလုကာ၊
ဝိရောစယန္တေဝ ဒိသာ သမန္တာ၊
ဝါလုကာ = သဲနုတို့သည်။
သုသဇ္ဇိတာ = ပန်းထိမ်ဉာဏကြွယ် ကောင်းစွာ စီခြယ်အပ်ကုန်သော။
မုတ္တမယာဝ = ဖြူဆွရိုးရဲ ရတနာပုလဲလုံးတို့ကဲ့သို့။
သုသဏ္ဌိတာ = ကောင်းစွာစီရီ ညီညွတ်စွာတည်ကုန်လျက်။
စာရုသုဖဿဒါတာ = တင့်တယ်လျောက်ပတ် ကောင်းမြတ်သော အတွေ့ကို ပေးကုန်သည်ဖြစ်၍။
သမန္တာဒိသာ = ဝန်းကျင်ပတ်ချာ အရပ်မျက်နှာတို့ကို။
ဝိရောစယန္တေဝ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ်စေသကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်၏။
မဟာဝီရ = ကြီးမြတ်သော ဝီရိဝရှိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား …။
သမံ သုဖဿံ သုစိဘူမိဘာဂံ၊
ဝိရာဇမာနံ သုစိမဉ္စ သောဘံ၊
သုစိဘူမိဘာဂံ = ညစ်ကြေးသန့်စင် မြေအပြင်သည်။
သမံ = ကုန်း, ကျင်း မရှိ ပကတိ ညီညွတ်စွာ၏။
သုဖဿံ = ချောပြေနုမွေ့ ကောင်းသောအတွေ့ ရှိ၏။
မနုညပုပ္ဖေါဒယဂန္ဓဝါသိတံ = နှစ်သက်ဖွယ်သော ပန်းပွင့်တို့၏ ပွားဆင့်တိုးတက်သော ရနံ့ဖြင့် ပျံ့တကြိုင်ကြိုင် လှိုင်၍ နေပေ၏။
ဝိရာဇမာနံ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ်သည်ဖြစ်၍။
သုစိမဉ္စ = သာယာသန့်ရှင်း စင်ကြယ်ခြင်းလည်း ရှိပါပေ၏။
သောဘဉ္စ = သွားရန်လျောက်ပတ် ကောင်းလည်း ကောင်းမြတ်လှပါပေ၏။
သုဂန္ဓဘူတံ ပဝနံ သုရမ္မံ၊
ဝိစိတ္တနာနာ ဒုမသဏ္ဍမဏ္ဍိတံ = ဆန်းကြယ်ထူးထွေသော သစ်ပင်အပေါင်းတို့ဖြင့် တန်းဆာဆင်အပ်သော။
သုဂန္ဓဘူတံ = ကောင်းစွာသင်းပျံ့ ပန်းရနံ့ထူးရှိသည်ဖြစ်၍ ဖြစ်သော။
ပဝနံ = ရာဇဂြိုဟ်, ကပိလ နှစ်ဌာနကြားလမ်း တောစခန်းသည်။
သုသဇ္ဇိတံ = နတ်သဘင်ပွဲ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲအောင် ယင်နွှဲအံ့ငှါ နတ်ဒေဝါတို့ ကောင်းစွာပြုပြင် တန်းဆာဆင်အပ်သော။
နန္ဒနကာနနံဝ = နန္ဒဝန်ခေါ်တွင် နတ်ဥယျာဉ်ကြီးကဲ့သို့။
သုရမ္မံ = လွန်စွာတင့်တယ် နှလုံးမွေ့လျော်ဖွယ် ရှိပါပေ၏။
သရာ ဝိစိတ္တာ ဝိဝိဓာ မနောရမာ၊
သရာ = လမ်းခရီးအကြား ရေအိုင်များတို့သည်။
ပသန္နသီတောဒကစာရုပုဏ္ဏာ = ညစ်ကြေးသန့်စင် ကြည်လင်အေးမြသော ရေတို့ဖြင့် တင့်တယ်စွာ ပြည့်ကုန်သည်ဖြစ်၍။
ပင်္ကဇပုဏ္ဍရီကာ = ညွန်၌ကြီးပွား ကြာငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံကုန်သည်ဖြစ်၍။
သုသဇ္ဇိတာ = ကောင်းမြတ်တင့်တယ် ခြယ်လယ်အပ်ကုန်သကဲ့သို့ ဖြစ်၍။
ဝိစိတ္တာ = ရှုချင်စဖွယ် ဆန်းကြယ်လှကုန်၏။
ဝိဝိဓာ = အထူးထူး အပြားပြားအားဖြင့်။
မနောရမာ = စိတ်နှလုံး၏ ရွှင်ပြုံးမွေ့လျော်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ကုန်၏။
သုဖုလ္လနာနာဝိဓပင်္ကဇေဟိ = ကောင်းစွာပွင့်ဖူး အထူးထူးသော ကြာမျိုးတို့ဖြင့်။
ဝိရာဇမာနာ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ်ကုန်သော။
(သရာ = ရေအိုင်တို့သည်။)
သုစိဂန္ဓဂန္ဓာ = သန့်ရှင်းမွှေးကြိုင် ပန်းရနံ့တို့ဖြင့် လှိုင်ကုန်သည်ဖြစ်၍။
နရာမရာနံ = အနီးရောက်လတ် လူနှင့်နတ်တို့ကို။
ပမောဒယန္တေဝ = နှစ်လိုအားရမ်း ဝမ်းမြောက်စေသကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်၏။
ဒိဇာ သမန္တာ မဘိနာဒယန္တာ။
မောဒန္တိ ဘရိယာဟိ သမင်္ဂိနော တေ၊
သုဖုလ္လပင်္ကေရုဟသန္နိသိန္နာ = ကောင်းစွာစွင့်စွင့် ပွင့်သော ကြာပင်ဖျား၌ နားနေကြကုန်သော။
ဒိဇာ = ထူးထွေများတောင်း ငှက်အပေါင်းတို့သည်။
အဘိနာဒယန္တာ = ဝတ်ရည်ရစ်မူး တွန်ကျူးကြကုန်လျက်။
တေ = ထိုငှက်အပေါင်းတို့သည်။
ဘရိယာဟိ = ကြင်ဖော်မှန်လှ ချစ်ငှက်မတို့နှင့်။
သမင်္ဂိနော = တကွယှဉ်နွှဲ မောင်နှံတွဲကြကုန်လျက်။
မောဒန္တိ = ဝမ်းမြောက်ရွှင်ပျော် မွေ့လျော်ကြကုန်၏။
သုဖုလ္လပုပ္ဖေဟိ ရဇံ ဂဟေတွာ၊
အလီ ဝိဓာဝန္တိ ဝိကူဇမာနာ။
မဓုမှိ ဂန္ဓော ဝိဒိသံ ပဝါယတိ၊
အလီ = ပျားပိတုန်းတို့သည်။
ဝိကူဇမာနာ = တရုန်းရုန်း တဒီဒီ တွန်မြည်ကုန်သည်ဖြစ်၍။
သုဖုလ္လပုပ္ဖေဟိ = ကားကားစွင့်စွင့် ကောင်းစွာပွင့်သော ပန်းတို့မှ။
ရဇံ = ချိုမြိန်ရွှန်းစည် ပန်းဝတ်ရည်ကို။
ဂဟေတွာ = စုတ်ယူကြ၍။
ဝိဓာဝန္တိ = မြည်သံမစဲ ပျံဝဲပြေးသွားကြကုန်၏။
မဓုမှိ = ပျားကြီးပျားငယ် အသွယ်သွယ်၌။
ဂန္ဓော = သင်းကြူမွှေးပျံ့ ဝတ်ရည်နံ့သည်။
ဝိဒိသံ = အထူးထူးသော အရပ်မျက်နှာသို့။
ပဝါယတိ = ကြိုင်လှိုင်၍ နေ၏။
အဘိန္နနာဒါ မဒဝါရဏာ စ၊
ဂီရီဟိ ဓာဝန္တိ စ ဝါရိဓာရာ။
သဝန္တိ နဇ္ဇော သုဝိရာဇိတာဝ၊
မဒဝါရဏာ = အမုန်ယစ်သော ဆင်ပြောင်ကြီးတို့သည်။
အဘိန္နနာဒါစ = မကွဲမနာ ကြိုးကြာသံကဲ့သို့လည်း မြည်ဟည်းကြကုန်၏။
ဂိရီဟိ = တောင်တို့မှ။
ဝါရိဓာရာ စ = ရေအယဉ်တို့သည်လည်း။
ဓာဝန္တိ = အဟုန်ထန်ပြင်း စီးဆင်းပြေးသွားကြကုန်၏။
နဇ္ဇော = မြစ်တို့သည်။
သုဝိရာဇိတာဝ = ရှုချင်စဖွယ် လွန်စွာ တင့်တယ်ကုန်သည်ဖြစ်၍သာလျှင်။
သဝန္တိ = အဟုန်ထန်သည်း စီးသွားကြကုန်၏။
ဂိရီ သမန္တာဝ ပဒိဿမာနာ၊
မယူရဂီဝါ ဣဝ နီလဝဏ္ဏာ။
ဂိရီ = တောင်တို့သည်။
သမန္တာဝ = ရှစ်မျက်နှာခွင် ထက်ဝန်းကျင်မှသာလျှင်။
ပဒိဿမာနာ = ကြည့်လိုက်တိုင်းမြင် အလွန်ပင် ထင်ရှားကုန်လျက်။
မယူရဂီဝါ ဣဝ = ဥဒေါင်းမင်းလည်ရေးကဲ့သို့။
နီလဝဏ္ဏာ = စိမ်းတစိုစို ညိုသောအဆင်းရှိကုန်သည် ဖြစ်၍။
ဒိသာရဇိန္ဒာဝ = ဧရာဝတ စသည်ရှစ်သင်း ဒိသာဂဇဆင်မင်းတို့ကဲ့သို့။
(ဒိသာဂဇဆင် ရှစ်မျိုးကို မဂဓအဘိဓာန်ဂါထာ အမှတ် ၃၀ ၌ ကြည့်ရှု မှတ်ယူရာ၏။)
ဝိရောစယန္တိ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ်ကြကုန်၏။
နစ္စန္တိ နာရီဟိ သမင်္ဂိဘူတာ။
ဂိရိမုဒ္ဓနသ္မိံ = ကြွသွားရာလမ်းတခွင် ဝဲယာဖြစ်သော တောင်ထိပ်အပြင်၌။
မယူရသံဃာ = ဥဒေါင်းငှက်အပေါင်းတို့သည်။
နာရီဟိ = ကြင်ဖော်မှန်လှ ချစ်ဒေါင်းမတို့နှင့်။
သမင်္ဂိဘူတာ = တကွယှဉ်နွှဲ မောင်နှံတွဲကြကုန်သည် ဖြစ်၍။
နစ္စန္တိ = အမြီးကိုထောင် အတောင်ကိုကော့ ခေါင်းကို မော့၍ ကျော့ကျော့ရွှင်ဖြိုး တင့်စနိုးလျှင် ရှေ့တိုးနောက်ငင် လူ့အသွင်သို့ မြူးရွှင်ကခုန်ကြကုန်၏။
နာနာမဓုရဿရေဟိ = အထူးထူး အထွေထွေ “အိုးဝေ … အိုးဝေ” ဟူသော သာယာသော အသံတို့ဖြင့်။
ကူဇန္တိ = ဘာသာမဂဓ တွန်မြူး ကျူးရင့်ကြကုန်၏။
ဂိရိမှိ ဌတွာ အဘိနာဒယန္တိ၊
သုဝါဒိကာ = ကျေးငှက်အစရှိကုန်သော။
အနေကဒိဇာ = တပါးမက များလှစွာသော ငှက်အပေါင်းတို့သည်။
မနုညာ = ရှုတိုင်းတင့်တယ် နှစ်သက်ဖွယ်ရှိကုန်သည် ဖြစ်၍။
ဝိစိတ္တပတ္တေဟိ = ကံပန်းချီဆေး ဇာတိသွေးတို့ စီရေးခြယ်လယ် ဆန်းကြယ်သော အတောင်တို့ဖြင့်။
ဝိရာဇမာနာ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ်ကုန်သည်ဖြစ်၍။
ဂိရိမှိ = လမ်းခရီးဝဲယာ သေလာဂိရိပ် ထိုထို တောင်ထိပ်၌။
ဌတွာ = နားနေကြကုန်၍။
အဘိနာဒယန္တိ = သာယာရင့်ကျူး တွန်မြူးကြကုန်၏။
ဂိရီ ဝိရောစန္တိ ဒိသာ သမန္တာ၊
သမန္တာဒိသာ = ခရီးဝဲယာ ထက်ဝန်းကျင် အရပ်မျက်နှာတို့၌။
သုဖုလ္လပုပ္ဖါ’ကရမာဘိကိဏ္ဏာ = ကောင်းစွာပွင့်လန်း ပန်းတို့၏တည်ရာ များစွာတင့်ဆန်း သစ်ပင်တို့ဖြင့် ပြွမ်းကုန်လျက်၎င်း။
သုဂန္ဓနာနာဒလလင်္ကတာ စ = ကောင်းသော ရနံ့တို့ဖြင့် သင်းပျံ့လှိုင်ဝေ ထူးထွေများတောင်း ပွင့်ချပ်အပေါင်းတို့ဖြင့် တန်းဆာဆင်အပ်ကုန်လျက်၎င်း။
ဝိရောစန္တိ = ရှုမငြီးဖွယ် တင့်တယ်ကြကုန်၏။
သဝန္တိ နဇ္ဇော သုဝိရာဇမာနာ၊
ဇလာသယာ = ရေအိုင်တို့သည်။
သုရိန္ဒဥယျာနဇလာသယာဝ = သိကြားနတ်မင်းဥယျာဉ်အတွင်းဝယ် သန့်ရှင်းလှစွာ ကန်အိုင်သာတို့ကဲ့သို့။
အနေကသုဂန္ဓဂန္ဓာ = ထူးထွေများတောင်း ကောင်းသော ရနံ့တို့ဖြင့် ပျံ့တကြိုင်ကြိုင် လှိုင်၍ နေကုန်၏။
သုဝိရာဇမာနာ = ရှုချင်စဖွယ် လွန်စွာ တင့်တယ်ကုန်သည်ဖြစ်၍။
သဝန္တိ = အဟုန်ထန်သည်း တဒီးဒီးလျှင် စီး၍ နေကြကုန်၏။
ဝိစိတ္တတိတ္ထေဟိ အလင်္ကတာ စ၊
နဇ္ဇော ဝိရောစန္တိ သုသန္ဒမာနာ၊
ဝိစိတ္တတိတ္ထေဟိ = သွယ်သွယ်တင့်ဆန်း ဆိပ်ကမ်းတို့ဖြင့်။
အလင်္ကတာ စ = တန်းဆာဆင်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်း။
မနုညနာနာမိဂပက္ခိပါသာ = စိတ်၏ နှစ်သက်ဖွယ် အသွယ်သွယ်သော သားငှက်ခပင်းတို့၏ ကျော့ကွင်းသဖွယ် ဖြစ်ကုန်၍၎င်း။
သုသန္ဒမာနာ = အဟုန်ထန်လျင် တသွင်သွင် စီးဆင်းကြကုန်လျက်။
ဝိရောစန္တိ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ်ကြကုန်၏။
ဥဘောသု ပေဿသု ဇလာသယေသု၊
ဥဘောသု ပေဿသု = လမ်းခရီးဝဲယာ နှစ်ဖြာသော နံပါးတို့၌။
ဇလာသယေသု = ရေအိုင်တို့၌။
စာရုသုဂန္ဓရုက္ခာ = တင့်တယ်မွှေးကြိုင် ရနံ့လှိုင်သော သစ်ပင်တို့သည်။
သုပုပ္ဖိတာ = ကားကားစွင့်စွင့် ကောင်းစွာ ပွင့်ကြကုန်လျက်။
ဝိဘူသိတဂ္ဂါ = တန်းဆာဆင်ယင်အပ်သော အဖျားအညွန့်ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍။
သုရသုန္ဒရီဝ = နတ်မိန်းမပျိုနှယ် တင့်တယ်လှပေကုန်၏။
ဝနံ ဝိစိတ္တံ သုရနန္ဒနံဝ။
မနောဘိရာမံ သတတံ ဂတီနံ၊
သုဂန္ဓနာနာဒုမဇာလကိဏ္ဏံ = သင်းပျံ့မွှေးကြိုင် ရနံ့လှိုင်သော သစ်ပင်အပေါင်းတို့ဖြင့် ပြွမ်းသော။
ဝနံ = ခရီးလမ်းအပြင် တောတခွင်သည်။
သုရနန္ဒနံဝ = နတ်တို့ပျော်ရွှင် နန္ဒဝန်ဥယျာဉ်ကဲ့သို့။
ဝိစိတ္တံ = ဆန်းကြယ်လှသည်ဖြစ်၍။
ဂတီနံ = ခရီးသွားသူ ရှင်ရှင်လူတို့၏။
သတတံ မနောဘိရာမံ = အမြဲတစေ စိတ်နှလုံးမွေ့လျော်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပေ၏။
သဗျဉ္ဇနာ သာဒုရသေန ယုတ္တာ။
ပထေသု ဂါမေ သုလဘာ မနုညာ၊
ပထေသု = ရာဇဂြိုဟ်, ကပိလ နှစ်ဌာနစခန်း ခရီးလမ်းတို့၌။
ဂါမေ = ရောက်ရာ ရောက်ရာ ထိုထိုရွာ၌။
သဗျဉ္ဇနာ = စားမဲဟင်းလျာနှင့်တကွကုန်သော။
သာဒုရသေန = ချိုမြိန်ကောင်းမြတ် ရသာဓာတ်နှင့်။
ယုတ္တာ = ယှဉ်ကုန်သော။
မနုညာ = နှစ်သက်ဖွယ် ရှိကုန်သော။
သမ္ပန္နနာနာသုစိအန္နပါနာ = ချိုမြိန်လှစွာ ထွေလာများဖြင် ရှင်းသန့်စင်သည့် ဘောဇဉ်ခဲဖွယ် စားသောက်ဖွယ်တို့ကို။
သုလဘာ = ကောက်ပဲသိမ်းစ ခါသမယဝယ် ရလွယ်ပါကုန်၏။
ဝိရာဇိတာ အာသိ မဟီ သမန္တာ၊
ကုသုမာသနဿ = တောရပ်မြိုင်သာ ပန်းနေရာ၏။
မဟီ = မြေပြင်သည်။
ဝိရာဇိတာ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ်သည်ဖြစ်၍။
ရတ္တိံ = အ-ကာလတာ ညဉ့်အခါ၌။
ဣန္ဒဂေါပကေဟိ = သိကြားစောင့်ရှောက် ကွမ်းသွေးပေါက်ဟန် ပိုးပရံတို့ဖြင့်။
အလင်္ကတာဝ = တွေးတွေးနီတျာ တန်းဆာဆင်အပ်သကဲ့သို့။
ဝိစိတ္တဝဏ္ဏာ = ဆန်းကြယ်သော အဆင်းရှိသည်။
အာသိ = တင့်တယ်ကောင်းမြတ် ဖြစ်တုံလတ်ပြီ။
ဗဟူ ဟိ တတ္ထေဝ ဇနာ သမန္တာ၊
တတ္ထေဝ = ထိုရာဇဂြိုဟ်, ကပိလ နှစ်ဌာနအကြားစခန်း ခရီးလမ်း၌ပင်လျှင်။
ဗဟူ = များစွာကုန်သော။
ဇနာ = လူအပေါင်းတို့သည်။
ဝိသုဒ္ဓသဒ္ဓါဒိဂုဏေဟိ = စင်ကြယ်သန့်ရှင်း သဒ္ဓါစသော ဂုဏ်ကျေးဇူး ခပင်းတို့နှင့်။
ယုတ္တာ = ယှဉ်ကုန်လျက်။
သမ္ဗုဓ္ဓရာဇံ = သုံးလူ့သနင်း တရားမင်းဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို။
အဘိပတ္ထယန္တာ = ငါတို့ဌာန ဤလမ်းမှပင် ကြွလာလိမ့်မည် မြော်ရည်တောင့်တကြကုန်လျက်။
ဝသန္တိ = နေကြကုန်၏။
ဘိသေဟိ ခီရံဝ ရသံ ပဝါယတိ၊
ဝိစိတြအာရာမသုပေါက္ခရညော = ဆန်းကြယ်သော အရံဥယျာဉ်အတွင်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော ရေကန်တို့သည်။
ဝိစိတြနာနာပဒုမေဟိ = ထူးထွေဆန်းပြား ကြာမျိုးငါးပါးတို့ဖြင့်။
ဆန္နာ = အပြည့်တင်းကြမ်း ဖုံးလွှမ်းအပ်ကုန်၏။
ဘိသေဟိ = ကြာစွယ်ကြာရင်းတို့မှ။
ရသံ = ချိမြိန်ကောင်းစည် ရသာရည်သည်။
ခီရံဝ = နို့ရည်ကဲ့သို့။
ပဝါယတိ = ရနံ့သင်းကြိုင် လှိုင်၍ နေပါ၏။
ဥဘတောဝကာသေ = လမ်းခရီးဝဲယာ နှစ်ဖြာသောအရပ်၌။
မနုညရုက္ခာ = နှစ်သက်ဖွယ်တောင်း သစ်ပင်အပေါင်းတို့သည်။
ဝိစိတြနီလစ္ဆဒနေန = ဆန်းကြယ်ရွှန်းစို စိမ်းညိုသော သစ်ရွက်အပေါင်းဖြင့်။
အလင်္ကတာ = ပိတ်ဖုံးမိုးကာ တန်းဆာဆင်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍။
သမုဂ္ဂတာ = နဘန်မိုးမြင့် စွင့်စွင့်တက်ကြကုန်လျက်။
သတ္တသမူဟဘူတာ = များစွာလူထု ပေါင်းစုသကဲ့သို့ ဖြစ်၍ ဖြစ်ကုန်၏။
သုရိန္ဒလောကေ ဣဝ နန္ဒနံ ဝနံ။
ဝိစိတြနိလဗ္ဘမိဝ = ဆန်းကြယ်ညိုမှောင် တိမ်ရောင်တိမ်တန်းကဲ့သို့။
အာယတံ = မြစောင်းတန်းနှယ် ရှည်သွယ်စိမ်းလန်းသော။
ဝနံ = ရာဇဂြိုဟ်, ကပိလ နှစ်ဌာနသွားရာလမ်း တောတန်းသည်။
သုရိန္ဒလောကေ = သိကြားမင်းစံရာ တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌။
နန္ဒနံ ဝနံ ဣဝ = နန္ဒဝန်ခေါ်တွင် နတ်ဥယျာဉ်ကဲ့သို့။
သဗ္ဗောတုကံ = ဆောင်း, နွေ, မိုးဟု သုံးဥတုအား လျောက်ပတ်သည်ဖြစ်၍။
သာဓုသုဂန္ဓပုပ္ဖံ = ကောင်းမြတ်မွှေးကြိုင် ရနံ့ကောင်းလှိုင်သော ပန်းအမျိုးမျိုး ရှိပေ၏။
သုဘိက္ခဂါမာ သုလဘာ မနုညာ။
ယောဇန ယောဇနေသု = ယူဇနာတိုင်း ယူဇနာတိုင်းတို့၌။
အဉ္ဇသံ = ခရီးလမ်းသည်။
သုဘံ = တင့်တယ်ကောင်းမွန်လှပါ၏။
မနုညာ = စိတ်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ကုန်သော။
သုဘိက္ခဂါမာ = ဝပြောသာယာ ဆွမ်းခံရွာတို့ကို။
သုလဘာ = ရလွယ်ပါကုန်၏။
တေ = ထိုတယူဇနာ တယူဇနာ၌ ဆွမ်းခံရွာတို့သည်။
ဇနာဘိကိဏ္ဏာ = ရွာ၌နေသူ လူတို့ဖြင့် ပြွမ်းကုန်သည်ဖြစ်၍။
သုလဘန္နပါနာ = မငြိုမငြင် မပင်မပန်း ရလွယ်သော ဆွမ်းအဖျော်ယမကာ ရှိပါကုန်၏။
ဝိသာလသာလာ စ သဘာ စ ဗဟူ၊
ဗဟူ = လမ်းခရီးအကြား များစွာကုန်သော။
ဝိသာလသာလာ စ = ကျယ်ပြန့်သော စရပ်တို့သည်၎င်း။
သဘာ စ = လူတို့ပေါင်းဆုံ အစည်းအဝေးရုံတို့သည်၎င်း။
ပဟူတဆာယူဒကရမ္မဘူတာ = ပေါများပြည့်လျှမ်း အရိပ် ရေချမ်းတို့ဖြင့် ရွှင်လန်းမွေ့လျော်ဖွယ် ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍။
နိဝါသိနံ = တည်းခိုနေသူ ရှင်ရှင်လူတို့အား။
သဗ္ဗသုခပ္ပဒါတာ = ကာယစိတ္တ သုခနှစ်ဖြာ အလုံးစုံသော ချမ်းသာကို ပေးတတ်စွာကုန်၏။
ပထေ = ရာဇဂြိုဟ်, ကပိလ နှစ်ဌာနစခန်း ခရီးလမ်း၌။
သုမာပိတာ = နတ်လမ်းသုတ်သင် သူတော်စင်တို့ တီထွင်တူးဖော်အပ်ကုန်သော။
မနုညဥယျာနသုပေါက္ခရညော = စိတ်နှစ်သက်ဖွယ် အသွယ်သွယ်သော ဥယျာဉ်ရေကန်တို့သည်။
ဝိစိတ္တနာနာဒုမသဏ္ဍမဏ္ဍိတာ = ဆန်းကြယ်ထူးထွေသော သစ်ပင်အပေါင်းတို့ဖြင့် တန်းဆာဆင်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍။
သာဓုသုဂန္ဓဂန္ဓာ = ကောင်းမြတ်မွှေးကြိုင် ရနံ့တို့ဖြင့် လှိုင်ကုန်၏။
နဘာ စ အဗ္ဘာ ဝိဂတာ သမန္တာ။
ဒိသာ စ သဗ္ဗာဝ ဝိရောစယန္တိ၊
မုဒုသီတလသာဓုရူပေါ = နူးညံ့အေးမြ ကောင်းမွန်လှသော သဘောရှိပါ၏။
နဘာ စ = အဇဋာပြင် မိုးကောင်းကင်သည်လည်း။
သမန္တာ = မည်းညစ်ညိုမှောင် မိုးတိမ်တောင်မှ။
ဝိဂတာ = ကင်းရှင်းစင်ကြယ်လှပါ၏။
သဗ္ဗာဝ = အလုံးစုံသာလျှင်ဖြစ်ကုန်သော။
ဒိသာ စ = အရပ်မျက်နှာတို့သည်လည်း။
ဝိရောစယန္တိ = ရှုချင်စဖွယ် တင့်တယ်တောက်ပကြကုန်၏။
ရတ္တိံ ပဝဿန္တိ စ မန္ဒဝုဋ္ဌီ။
နဘေ စ သူရော မုဒုကောဝ တာပေါ၊
ရဇောနုဂ္ဂမနတ္ထမေဝ = မြူမှုန်မထ မကြွစေခြင်းငှါသာလျှင် (ဝါ၊ မြူမှုန်မထမကြွရုံသာ)။
ရတ္တိံ = ညဉ့်အခါ၌။
မန္ဒဝုဋ္ဌီစ = လေပြည်ဆော်သွေး မိုးသေးမိုးဖွဲတို့သည်လည်း။
ပဝဿန္တိ = မယုတ်မလွန် ရွာသွန်ကြကုန်၏။
သူရော စ = နေမင်းသည်လည်း။
မုဒုကောဝ တာပေါ = နူးညံ့လှစွာ ခံသာရုံသာ ထွန်းလင်းတောက်ပ၏။
ဒိသာ ဝိဓာဝန္တိ စ ဂဇ္ဇယန္တာ၊
မဒပ္ပဗာဟာ = လွန်စွာထန်ပြင်း မာန်ယစ်ခြင်းရှိကုန်သော။
မဒဟတ္ထိသံဃာ = အမုန်ယိုစီး ဆင်ပြောင်ကြီးအပေါင်းတို့သည်။
ကရေဏုသံဃေဟိ = ကြင်ဖော်မှန်လှ ဆင်မအပေါင်းတို့ဖြင့်။
သုကီဠယန္တိ = မြူးတူးပျော်ပါး ကစားကြကုန်၏။
ဂဇ္ဇယန္တာ = ကြိုးကြာသံကဲ့သို့ ကြည်းညည်းဟစ်အော်ကုန်လျက်။
ဒိသာစ = အရပ်မျက်နှာ ဦးတည်ရာတို့သို့လည်း။
ဝိဓာဝန္တိ = ထိုမှဤမှ ပြေးသွားကြကုန်၏။
ဝနံ သုနီလံ အဘိဒေဿနီယံ၊
နီလဗ္ဘကူဋံ ဣဝ ရမ္မဘူတံ။
သုနီလံ = စိမ်းတစိုစို ညိုသော အဆင်းရှိသည်ဖြစ်၍။
အဘိဒဿနီယံ = ရှုချင်စဖွယ် အလွန်ပင် တင့်တယ်လှပေ၏။
နီလဗ္ဘကူဋံ ဣဝ = မည်းနက်ညိုမှောင် မိုးတိမ်တောင်ကဲ့သို့။
ရမ္မဘူတံ = နှလုံးမွေ့လျော် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်၍လည်း ဖြစ်ပါ၏။
ဝိလောကိတာနံ = ကြည့်ရှုကုန်သူ ရှင်ရှင်လူတို့၏။
အတိဝိမှနီယံ = ထူးထွေဆန်းကြယ် အလွန်အံ့သြဖွယ်လည်း ဖြစ်ပါ၏။
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ “မဟာဗုဒ္ဓဝင်” မှ
Posted by LokaChantha at 11:48 PM No comments:
စိတ်ကို ခွဲခြား ဝေဖန်ခြင်း (၅) - ဝတ္ထုသင်္ဂဟ
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက် စနေနေ့တွင် လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း၌ အပတ်စဉ် အဘိဓမ္မာသင်တန်းကို ဆက်လက် ပြုလုပ်ရာ (၂၁)ပတ်မြောက် ပို့ချချက် ပကိဏ်းပိုင်းမှ ဝတ္ထုသင်္ဂဟအကြောင်းကို သင်ကြား လေ့လာကြရ၏။
ရှေးဦးစွာ လောကချမ်းသာဆရာတော်က ဝတ္ထုသင်္ဂဟအကြောင်း အနှစ်ချုပ် ရှင်းပြပြီး ဆရာတော်အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသ၏ အသံသွင်း သင်ကြား ပို့ချချက်ကို နာယူ သင်ယူ လေ့လာ မှတ်သားကြရသည်။
ဝတ္ထု = မှီရာ တည်ရာ
အိမ်သည် လူ၏ မှီရာ တည်ရာ ဖြစ်သကဲ့သို့ စိတ်၏ တည်ရာ မှီရာအဖြစ် ‘ဝတ္ထု’ဟု ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်၏။
ဝတ္ထု ၆ မျိုး
စက္ခုဝတ္ထု = စက္ခုပသာဒ (မျက်စိအကြည်ဓာတ်)
သောတဝတ္ထု = သောတပသာဒ (နားအကြည်ဓာတ်)
ဃာနဝတ္ထု = ဃာနပသာဒ (နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်)
ဇိဝှါဝတ္ထု = ဇိဝှါပသာဒ (လျှာအကြည်ဓာတ်)
ကာယဝတ္ထု = ကာယပသာဒ (ကိုယ်အကြည်ဓာတ်)
ဟဒယဝတ္ထု = နှလုံးသွေး [အစဉ်အလာ အယူ]
ဝတ္ထု ၆ ပါးနှင့် ၃၁ ဘုံ
ကာမ ၁၁ ဘုံ (အပါယ် ၄ + လူ ၁ + နတ် ၆) တွင် ဝတ္ထုရုပ် ၆ ပါးစလုံး ရနိုင်၏။
အသညသတ်ကြဉ်သော ရူပဘုံ ၁၅ ဘုံ၌ ‘စက္ခု’၊ ‘သောတ’၊ ‘ဟဒယ’ ဝတ္ထု သုံးပါးသာ ရ၏။
(ဗြဟ္မာကြီးများတွင် နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ် အသီးသီး ရှိကြသော်လည်း ပသာဒ အကြည်ဓာတ် မရှိ၍ ဃာနဝတ္ထု၊ ဇိဝှါဝတ္ထု၊ ကာယဝတ္ထု မရှိဟု ဆိုသည်။ အနံ့အာရုံ, အရသာအာရုံ, အထိအတွေ့အာရုံတို့ကြောင့် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ မဖြစ်ရန် ဤပသာဒများကို မလိုချင်၍ ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။)
အသညသတ်ရူပဘုံမှာ မှီမည့် တည်မည့် စိတ်မရှိ၍ ဝတ္ထု မရ။
အရူပ ၄ ဘုံ၌ မှီစရာ တည်စရာ ရုပ်မရှိ၍ ဝတ္ထု မရ။
ဝတ္ထု ၆ ပါးနှင့် စိတ် ၈၉ ပါး
စက္ခုဝတ္ထုကို မှီသော စိတ် = စက္ခုဝိညာဏ်စိတ် ၂ ပါး
သောတဝတ္ထုကို မှီသော စိတ် = သောတဝိညာဏ်စိတ် ၂ ပါး
ဃာနဝတ္ထုကို မှီသော စိတ် = ဃာနဝိညာဏ်စ်တ် ၂ ပါး
ဇိဝှါဝတ္ထုကို မှီသော စိတ် = ဇိဝှါဝိညာဏ်စိတ် ၂ ပါး
ကာယဝတ္ထုကို မှီသော စိတ် = ကာယဝိညာဏ်စိတ် ၂ ပါး
ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲမှီသော စိတ် = ဒေါသမူ ၂ + မနောဓာတ် ၃ + သန္တီရဏ ၃ + ဟသိတုပ္ပါဒ် ၁ + မဟာဝိပါက် ၈ + ရူပါဝစရ ၁၅ + သောတာပတ္တိမဂ် ၁ (စုစုပေါင်း ၃၃ ပါး)
ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါမှီသော စိတ် = လောဘမူ ၈ + မောဟမူ ၂ + မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း ၁ + မဟာကုသိုလ် ၈ + မဟာကြိယာ ၈ + အရူပကုသိုလ် ၄ + အရူပကြိယာ ၄ + သောတာပတ္တိမဂ်,မပါ ကျန်သော လောကုတ္တရာစိတ် ၇ (စုစုပေါင်း ၄၂ ပါး)
ဝတ္ထုမမှီသော စိတ် = အရူပဝိပါက် ၄
ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲမှီ ရံခါမှီ ခွဲခြားခြင်း
အမြဲမှီ = အရူပါဝစရဘုံမှာ မဖြစ်နိုင်သောစိတ်၊ ကာမဘုံ ရူပဘုံမှာသာ ဖြစ်နိုင်သောစိတ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲမှီ၏။
ဒေါသမူဒွေး - ဗြဟ္မာဘုံတွင် ဖြစ်ကို မဖြစ်။ အရူပဘုံမှာ မဖြစ်။
မနောဓာတ် ၃ ပါး - ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းနှင့် သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းဒွေးတို့သည် ၅-ဒွါရမှာသာ ဖြစ်၏။ မနောဒွါရမှာ မဖြစ်။ အရူပဘုံမှာ မဖြစ်။
သန္တီရဏ ၃ ပါး - ဒွါရအားဖြင့် ကိစ္စအားဖြင့် အရူပဘုံမှာ သန္တီရဏနှင့် ပတ်သက်တာ မရှိ။ ပဉ္စဒွါရမှာ ဖြစ်၊ မနောဒွါရမှာ ဖြစ်သော်လည်း အထူးသဖြင့် ပဉ္စဒွါရမှာ ဖြစ်၏။ အရူပဘုံမှာ မဖြစ်။
ဟသိတုပ္ပါဒ် - အရူပဘုံတွင် ရုပ်မရှိ၍ မပြုံးနိုင်။ ကာမဘုံ ရူပဘုံမှာသာ ဖြစ်နိုင်၏။ အရူပဘုံမှာ မဖြစ်။
မဟာဝိပါက် ၈ ပါး - ကာမာဝစရဘုံမှာသာ ဖြစ်၏။
ရူပါဝစရ ၁၅ - ရူပါဝစရဘုံနှင့် ကာမာဝစရဘုံမှာသာ ထိုက်သည့်အားလျော်စွာ ဖြစ်၏။ အရူပဘုံမှာ မဖြစ်။
သောတာပတ္တိမဂ် - (ဘုရားနှင့် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါများမှ လွဲ၍) သောတာပတ္တိမဂ်ရဖို့ရန် အကြောင်းများအနက် တစ်ခုမှာ ‘ပရတော ဃောသ’ ခေါ် သူတစ်ပါးဆီက တရားနာရမှ တရားအားထုတ်ပြီး သောတာပန်ဖြစ်နိုင်ရာ အရူပဘုံ၌ ပုထုဇဉ်အဖြစ် ရောက်သွားက တရားနာစရာ နားမရှိသဖြင့် သောတာပတ္တိမဂ် မဖြစ်နိုင်။ (ရပ်ပြစ် ၈ ပါး၌ အရူပါဝစရဘုံ ပါ၏။) လူ့ပြည်တွင် သောတာပတ္တိမဂ်ရပြီး အရူပဗြဟ္မာဖြစ်သော်မူ ဆက်ပြီး တရားအားထုတ်က မဂ်ဉာဏ်အဆင့်ဆင့် တက်ကာ ရဟန္တာဖြစ်နိုင်၏။)
ရံခါမှီ = အရူပဘုံမှာလည်း ဖြစ်၊ ကာမဘုံ ရူပဘုံမှာလည်း ဖြစ်သောစိတ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါမှီသည်ဟု ဆိုရ၏။ ကာမဘုံ, ရူပဘုံတို့၌ ဖြစ်ခိုက် ဟဒယဝတ္ထုကို မှီ၏၊ အရူပဘုံ၌ ဖြစ်ခိုက် ဟဒယဝတ္ထုကို မမှီ။
လောဘမူ ၈၊ မောဟမူ ၂၊ မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း ၁၊ မဟာကုသိုလ် ၈၊ မဟာကြိယာ ၈၊ အရူပါဝစရကုသိုလ် ၄၊ အရူပါဝစရကြိယာ ၄၊ သောတာပတ္တိဖိုလ်မှ အရဟတ္တဖိုလ်တိုင် လောကုတ္တရာ ၇၊ စုစုပေါင်း ၄၂ ပါးသော စိတ်များမှာ ကာမာဝစရဘုံ ရူပါဝစရဘုံမှာ ဖြစ်သောအခါ ဟဒယဝတ္ထုကို မှီ၏။ အရူပါဝစရဘုံမှာ ဖြစ်သောအခါ ဟဒယဝတ္ထုကို မမှီ။
အရူပါဝစရဝိပါက်စိတ် ၄ ခုမှာ အရူပါဝစရဘုံမှာသာ ဖြစ်သောကြောင့် မှီစရာ ဝတ္ထု လုံးဝ မရှိ။
အရူပါဝစရစိတ် ၁၂ ခုအနက် အရူပါဝစရကုသိုလ်စိတ် ၄ ခုသည် လူ့ပြည်မှာ ဖြစ်နိုင် ရနိုင်၏။ အရူပါဝစရကြိယာစိတ် ၄ ခုလည်း လူ့ပြည်မှာ ဖြစ်နိုင်၏။
အရူပါဝစရဝိပါက်စိတ် ၄ ခုမှာ လူ့ပြည်, နတ်ပြည်, ရူပါဝစရဗြဟ္မာ့ပြည်တို့မှာ မဖြစ်နိုင်၊ အရူပါဝစရဗြဟ္မာ့ပြည်မှာသာ ဖြစ်နိုင်၏။
စက္ခုဝိညာဏ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ရန် မြင်ကြောင်း စက္ခုဝတ္ထု စက္ခုပသာဒ၊ မြင်စရာ အာရုံ ရူပါရုံ၊ အလင်းရောင်၊ နှလုံးသွင်းမှု မနသိကာရတို့ လို၏။
သောတဝိညာဏ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ရန် ကြားကြောင်း သောတဝတ္ထု၊ ကြားစရာ အသံ၊ အာကာသ၊ နှလုံးသွင်းမှုတို့ လို၏။
ဃာနဝိညာဏ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ရန် ဃာနပသာဒ၊ ဂန္ဓာရုံ၊ ဝါယောဓာတ်၊ မနသိကာရ၊
ဇိဝှါဝိညာဏ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ရန် ဇိဝှါပသာဒ၊ ရသာရုံ၊ အာပေါဓာတ်၊ မနသိကာရ၊
ကာယဝိညာဏ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ရန် ကာယပသာဒ၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ၊ ထဒ္ဓပထဝီ၊ မနသိကာရတို့ လို၏။
ထို့ကြောင့် ဒွေးပဉ္စဝိညာဏ် ၁၀ ပါးသည် ဝတ္ထုရုပ် ၅-ပါးကို ထိုက်သည့် အားလျော်စွာ မှီ၏။
ကျန်စိတ်များမှာ ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။ အမြဲ မှီ၏။
အပြန်အားဖြင့် စိတ်များ၏ မှီရာဝတ္ထုကို ဆိုသော် -
လောဘမူစိတ် ၈ ခုသည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
ဒေါသမူစိတ် ၂ ခုသည် ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲ မှီ၏။
မောဟမူစိတ် ၂ ခုသည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
စက္ခုဝိညာဏ်စိတ် ၂ ခုသည် စက္ခုဝတ္ထုကို မှီ၏။
သောတဝိညာဏ်စိတ် ၂ ခုသည် သောတဝတ္ထုကို မှီ၏။
ဃာနဝိညာဏ်စိတ် ၂ ခုသည် ဃာနဝတ္ထုကို မှီ၏။
ဇိဝှါဝိညာဏ်စိတ် ၂ ခုသည် ဇိဝှါဝတ္ထုကို မှီ၏။
ကာယဝိညာဏ်စိတ် ၂ ခုသည် ကာယဝတ္ထုကို မှီ၏။
သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းစိတ် ၂ ခုသည် ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲ မှီ၏။
သန္တီရဏစိတ် ၃ ခုသည် ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲ မှီ၏။
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲ မှီ၏။
ဟသိတုပ္ပါဒ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲ မှီ၏။
မဟာကုသိုလ်စိတ် ၈ ပါးသည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
မဟာဝိပါက်စိတ် ၈ ပါးသည် ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲ မှီ၏။
မဟာကြိယာစိတ် ၈ ပါးသည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
ရူပါဝစရစိတ် ၁၅ ခုသည် ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲ မှီ၏။
အရူပါဝစရကုသိုလ်စိတ် ၄ ခုသည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
အရူပါဝစရဝိပါက်စိတ် ၄ ခုသည် မည်သည့်ဝတ္ထုမှ မမှီ။
အရူပါဝစရကြိယာစိတ် ၄ ခုသည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
သောတာပတ္တိမဂ်စိတ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲ မှီ၏။
သောတာပတ္တိဖိုလ်စိတ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
သကဒါဂါမိမဂ်စိတ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
သကဒါဂါမိဖိုလ်စိတ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
အနာဂါမိမဂ်စိတ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
အနာဂါမိဖိုလ်စိတ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
အရဟတ္တမဂ်စိတ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
အရဟတ္တဖိုလ်စိတ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါ မှီ၏။
ဝိညာဏဓာတ် ၇ ပါး
၁။ စက္ခုဝိညာဏဓာတ် - စက္ခုဝိညာဏ်စိတ် ၂
၂။ သောတဝိညာဏဓာတ် - သောတဝိညာဏ်စိတ် ၂
၃။ ဃာနဝိညာဏဓာတ် - ဃာနဝိညာဏ်စိတ် ၂
၄။ ဇိဝှါဝိညာဏဓာတ် - ဇိဝှါဝိညာဏ်စိတ် ၂
၅။ ကာယဝိညာဏဓာတ် - ကာယဝိညာဏ်စိတ် ၂
၆။ မနောဓာတ် - သမ္ပဋိစ္ဆန ၂ + ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန ၃
၇။ မနောဝိညာဏဓာတ် - ကြွင်းစိတ်များ ၇၆
အသိအင်အား ၃ မျိုး
မနောဓာတ်သည် သိရုံမျှကလေး အင်အားရှိ၏။
ပဉ္စဝိညာဏဓာတ် (စက္ခုဝိညာဏဓာတ်, သောတဝိညာဏဓာတ်, … စသည်)သည် မနောဓာတ်ထက် ပိုသိ၏။
မနောဝိညာဏဓာတ်သည် အားအရှိဆုံး ဖြစ်၏။
“အာရုံပြုဟန်၊ အတန်တန်ဝယ်၊ သာမန်သိသော၊ ဓာတ်သဘောကို၊ မနောဟုမှတ်။
မနောဓာတ်ထက်၊ လွန်ဓာတ်သိပြန်၊ ဝိညာဏံတည်း။
တဖန်ထို့ထက်၊ ဆတက်ကဲချွန်၊ အလွန်အကြူး၊ အထူးသိသော၊ ဓာတ်သဘောကား၊ မနောဝိညာဉ်၊ အမည်တွင်သည်၊ ဤတွင် မှတ်ဖွယ် အချုပ်တည်း။”
အခြေခံအားဖြင့် စိတ်ပိုင်း၊ စေတသိက်ပိုင်း၊ ပကိဏ်းပိုင်း ပြီးသွားပြီဖြစ်ရာ ဤသုံးပိုင်းစလုံး၏ သရုပ်ခွဲကို ကျေညက်စေအောင် ဇယားများရေးဆွဲ၍ လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန် ဆရာတော်က ညွှန်ကြား တိုက်တွန်း၏။
အဘိဓမ္မာသင်တန်း ဒုတိယအချိန်တွင် စိန်စည်ဆရာတော်က ဝတ္ထုသင်္ဂဟကို ကျက်မှတ်ရန် လင်္ကာများဖြင့် ထပ်မံ ရှင်းပြပေးသွား၏။
စိတ်မှီရာစု၊ ပေါင်းကာပြု၊ ဝတ္ထုသင်္ဂဟ။
‘စက်’ ‘သော’ ‘ဃာ’ ‘ဇီ’၊ ‘ကာယံ’မှီ၊ တစ်လီ‘ဟဒယ’
ဝတ္ထုခြောက်စုံ၊ ကာမဘုံ၊ အကုန် အပြည့်ရ။
‘စက်’ ‘သော’ ‘ဟဒယ’၊ ဤသုံးဝ၊ ရူပဘုံမှာ ရ။
ရုပ်မရှိကြ၊ အရူပ၊ လုံးဝ ဝတ္ထုမရှိကြ။
စိတ်မရှိရာ၊ အသညာ၊ ရုပ်ဟာ ဝတ္ထုမခေါ်ရ။
ပဉ္စဝေါကာ၊ ငါးခန္ဓာ၊ လေးမှာ ခေါ်ကြ စတုဝေါကာရ။
တစ်ပါးခန္ဓာ၊ ဧကဝေါကာ၊ မှတ်ပါ ဘုံခေါ်ရ။
ခန္ဓာငါးပါးရှိသော ကာမဘုံ၊ ရူပဘုံကို ပဉ္စဝေါကာရဘုံဟု ခေါ်သည်
ခန္ဓာလေးပါး (နာမ်ခန္ဓာလေးပါး) ရှိသော အရူပဘုံကို စတုဝေါကာရဘုံဟု ခေါ်သည်။
ခန္ဓာတစ်ပါးရှိသော အသညတ်ဘုံကို ဧကဝေါကာရဘုံဟု ခေါ်သည်။
အဘိဓမ္မာသင်တန်းပြီးသောအခါ ခေတ္တ အနားယူ အဆာပြေ စားသောက်ကြ၍ လောကချမ်းသာ စနေနေ့တရားပွဲကို ရိုသေစွာ နာယူကြရ၏။
စိန်စည်ဆရာတော်က “အာသဝေါတရားကင်းရေးတရားတော်”ကို ရှင်းလင်း လွယ်ကူသော လင်္ကာများဖြင့် ဟောကြား ဓမ္မဒါနပြု၏။
ကျင့်ဖို့မလို၊ သိဖို့လို၊ ပြောဆိုနေကြသည်။
အသိသုံးပါး၊ မကွဲပြား၊ လွဲမှား ဟောပြောနေတတ်သည်။
ဘယ်အသိအား၊ ရည်ရွယ်ငြား၊ ဟောကြားနေသနည်း။
ခွေးသိဝက်သိ၊ ကျွဲနွားသိ၊ အသိပြည့်စုံနေပြီလား။
ကျောက်ဆင်းတုတောင်၊ ခေါင်းညိတ်အောင်၊ ပုံဆောင်ပြောကြသည်။
ကွန်မြူနစ်သိ၊ ‘နောင်’မရှိ၊ အသိပြည့်စုံနေပြီလား။
‘ညာတ’,‘တီရဏ’၊ ‘ပဟာန’၊ သုံးဝ အသိကွဲပြားသည်။
စာသိပေသိ၊ နာကြားသိ၊ ‘ညာတသိ’ဟု ခေါ်ဆိုသည်။
ဇယားကွက်သိ၊ စက်ဝိုင်းသိ၊ ညာတသိဟု ခေါ်ဆိုသည်။
ကျင့်သိပွားသိ၊ ဖြစ်ပျက်သိ၊ ‘အသိတီရဏ’ ခေါ်ဆိုသည်။
ကိလေပယ်သိ၊ မဂ်ဖိုလ်သိ၊ ‘အသိပဟာန’ ခေါ်ဆိုသည်။
စာပေသိမှ၊ လမ်းမှန်ရ၊ ကျင့်ရကြံရ လွယ်ကူသည်။
ကျင့်နည်းမှန်မှ၊ မဂ်ဖိုလ်ရ၊ လေးဝအာသဝ လွတ်မြောက်သည်။
ကျင့်နည်းမှန်မှ၊ မဂ်ဖိုလ်ရ၊ လေးဝအပါယ် လွတ်မြောက်မည်။
ကျင့်နည်းမှန်မှ၊ အာသဝ၊ လေးဝ ကုန်ခန်းမည်။
အာသဝေါ လေးဝ၊ ပယ်နိုင်မှ၊ ပဟာနသိ ခေါ်ဆိုသည်။
ပဟာနသိ၊ သူရရှိ၊ အသိပြည့်စုံသည်။
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဖြင့် သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားဖြင့် အသိအမြင်မှန်မှ ကာမာသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ ဒိဋ္ဌာသဝ၊ အဝိဇ္ဇာသဝ တည်းဟူသော အာသဝေါတရားလေးပါးမှ ကင်းလွတ်သည့် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ရာ အသိအမြင် မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြင့် ဆင်းရဲငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်သို့ လက်တွေ့ ကျင့်ကြံပွားများသွားကြရန် စိန်စည်ဆရာတော်မှ တိုက်တွန်း အမိန့်ရှိကာ ဆုတောင်း၊ ကောင်းမှုကုသိုလ် အမျှပေးဝေကြ၏။
Posted by LokaChantha at 3:28 PM No comments:
တပေါင်းလပြည့်နေ့ ဗုဒ္ဓ ဝန္ဒနာ (၁)
မြတ်စွာဘုရားသည် ဘုရားဖြစ်ပြီး၍ ပဌမဝါကို ဣသိပတနမိဂဒါဝုန်တော၌ နေတော်မူပြီးနောက် ပဝါရဏာပြုပြီးလျှင် ဥရုဝေလတောအုပ်သို့ ကြွ၍ ထိုဥရုဝေလတောအုပ်၌ သုံးလပတ်လုံး သီတင်းသုံး နေထိုင်တော်မူလျက် ရသေ့ညီနောင် ရှင်တထောင်တို့ကို အရဟတ္တဖိုလ်ပေါက် ချေချွတ်ဆုံးမတော်မူ၍ ထိုရသေ့ဖြစ်ဟောင်း ရဟန္တာ ရဟန်းပေါင်း တထောင်ခြံရံလျက် ပြာသိုလပြည့်နေ့၌ ရာဇဂြိုဟ်ပြည်သို့ ရောက်တော်မူလေသည်။
ထိုရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ နှစ်လပတ်လုံး သီတင်းသုံး နေထိုင်တော်မူကာ တရားဟော ချေချွတ်သဖြင့် အင်္ဂတိုင်းသား မဂဓတိုင်းသား အမျိုးကောင်းသား တသောင်းကျော် ရဟန္တာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ၍ ရဟန်းအဖြစ်ကို ရရှိကြလေသည်။
ဤမျှဖြင့် ဗာရာဏသီမှ ထွက်ကြွတော်မူခဲ့သော မြတ်စွာဘုရားမှာ ငါးလတို့ ရှိခဲ့လေပြီ။
ဟေမန္တ ဆောင်းဥတု လွန်မြောက်၍ ဝသန္တ နွေဥတုအပြောင်း တပေါင်းလပြည့်နေ့သို့ ရောက်ခဲ့လေပြီ။
ထိုတပေါင်းလပြည့်နေ့ကား ကာဠုဒါယီမထေရ် ရောက်၍ ခုနစ်ရက် ရှစ်ရက် လွန်မြောက်သောနေ့ ဖြစ်လေသည်။
ထိုအခါ ကာဠုဒါယီမထေရ်သည် တပေါင်းလပြည့်နေ့၌ “ဟေမန္တဆောင်းဥတုကား လွန်မြောက်ခဲ့လေပြီ။ ဝသန္တနွေဦးပေါက် အချိန်သို့ ရောက်ခဲ့လေပြီ။ တောင်သူလယ်သမားတို့သည် ကောက်ပဲသီးနှံတို့ကို မိမိတို့လယ်ယာမှ ထုတ်နုတ် သိမ်းဆည်းပြီးကြပြီ ဖြစ်၍ ခရီးသွားများ လွယ်ကူစွာ သွားနိုင်ကြရန် ခရီးဦးတည့်ရာ အရပ်တို့မှ ခရီးလမ်းကို ဖွင့်၍ ပေးကြလေပြီ။ မဟာပထဝီ ဤမြေကြီးသည်လည်း စိုပြေ စိမ်းလန်းသော မြက်တို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျက် ရှိသည့်ပြင် ပတ်ဝန်းကျင် တောအုပ်အပေါင်းတို့လည်း ရွက်ဟောင်းကို စွန့်ပစ်၍ အရွက်သစ် လဲလှယ်ကာ တင့်တယ်စွာ သီးကြ ပွင့်ကြလေပြီ။ မပူလွန်း မအေးလွန်း လမ်းတိုင်း လမ်းတိုင်း သွား၍ ကောင်းသောအချိန် ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ မြတ်စွာဘုရား ဆွေတော်မျိုးတော်များအား ချီးမြှောက်ကြွရောက်ရန် အချိန်တန်ခဲ့လေပြီ”ဟု ကြံစည် ဆင်ခြင်ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရားထံမှောက်သို့ သွားရောက်၍ ဤဖော်ပြလတ္တံ့သော ဂါထာခြောက်ဆယ်ကျော်တို့ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားအား ကပိလဝတ်နေပြည်တော်သို့ ကြွရောက်တော်မူရန် ချီးမွမ်း လျှောက်ထားလေ၏။
အင်္ဂါရိနော ဒါနိ ဒုမာ ဘဒန္တေ၊
ဖလေသိနော ဆဒနံ ဝိပ္ပဟာယ။
တေ အစ္စိမန္တောဝ ပဘာသယန္တိ၊
ဒါနိ - ဣဒါနိ = ဆောင်းကို လွန်မြောက် နွေဦးပေါက်သို့ ရောက်လတ်တုံလာ ယခုအခါ၌။
ဒုမာ = တခေတ်ကူးပြောင်း သစ်ပင်အပေါင်းတို့သည်။
ဆဒနံ = ရှည်ကြာမြင့်ညောင်း အရွက်ဟောင်းကို။
ဝိပ္ပဟာယ = စွန့်ပယ်သောထွေ ကြွေကျကုန်၍။
ဖလေသိနော = အသစ်ဖြစ်သော အသီးကို ရှာမှီးကြကုန်သကဲ့သို့ ဖြစ်၍။
အင်္ဂါရိနော = မီးကျီးအသွေး နီတွေးသော ရွက်နု အပွင့်အဖူးတို့နှင့် ပြည့်စုံကြကုန်၏။
တေ = ထိုသစ်ပင်အပေါင်းတို့သည်။
အစ္စိမန္တောဝ = ဥတုလှုံ့ဆောင် အရောင်ရှိကုန်သည် ဖြစ်၍သာလျှင်။
ပဘာသယန္တိ = ပြောင်တဝင်းဝင်း ထွန်းလင်း တောက်ပကြကုန်၏။
မဟာဝီရ = ကြီးမြတ်သော ဝီရိယရှိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား ...။
သမယော = ဖွားရပ်ဌာနီ ပြည်ကပ္ပီသို့ နှစ်လီစက်ပန်း ကိုယ်တော်လှမ်း၍ ကြွမြန်းတော်မူရန် လျော်ကန်လျောက်ပတ် ကောင်းမြတ်သောအချိန်ပါဘုရား။
ဒုမာ ဝိစိတ္တာ သုဝိရာဇမာနာ၊
ရတ္တင်္ကုရေဟေဝ စ ပလ္လဝေဟိ။
ဒုမာ = သစ်ပင်အပေါင်းတို့သည်။
ရတ္တင်္ကုရေဟေဝ စ = သန္တာအသွေး နီတွေးသော အညွန့်တို့ဖြင့်၎င်း။
ပလ္လဝေဟိ စ = မြစိမ်းရောင်ဥ အရွက်နုတို့ဖြင့်၎င်း။
ဝိစိတ္တာ = အံ့သြစဖွယ် ဆန်းကြယ်လှပေကုန်၏။
သုဝိရာဇမာနာ = နှလုံးမွေ့လျော်ဖွယ် လွန်စွာ တင့်တယ်ပေကုန်၏။
ရတနုဇ္ဇမဏ္ဍပသန္နိဘာသာ = ရတနာရောင် ပြောင်ပြောင်ထိန်လျှပ် ပဏ္ဍပ်နှင့်လည်း တူကြပေကုန်၏။
သုပုပ္ဖိတဂ္ဂါ ကုသုမေဟိ ဘူသိတာ၊
ရုက္ခာ ဝိရောစန္တိ ဥဘောသု ပေဿသု၊
ဥဘောသု ပေဿသု = ဝဲယာစုံယှက် လမ်းခရီးနှစ်ဖက်တို့၌။
ရုက္ခာ = ဥတုအလျောက် ဖြစ်ပေါက်ကုန်သော သစ်ပင်တို့သည်။
သုပုပ္ဖိတဂ္ဂါ = ကောင်းစွာပွင့်သော အဖျားရှိကုန်သည်ဖြစ်၍။
ကုသုမေဟိ = ကားကားစွင့်စွင့် ပွင့်သော ပန်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်။
ဘူသိတာ = တန်းဆာဆင်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်း။
မနုညဘူတာ = ပင်တိုင်းတင့်တယ် နှစ်သက်ဖွယ်ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်း။
သုစိသာဓုဂန္ဓာ = စင်ကြယ်သန့်ရှင်း သင်းတကြိုင်ကြိုင် ရနံ့ကောင်းလှိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်း။
ဝိရောစန္တိ = ရှုတိုင်းအံ့ဖွယ် တင့်တယ်ကြကုန်၏။
မဟာဝီရ = ကြီးမြတ်သော ဝီရိယရှိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား ...။
ခုဒ္ဒံ ပိပါသမ္ပိ ဝိနောဒယန္တိ၊
ဝိစိတ္တရုက္ခာ = ဆန်းကြယ်ဘိတောင်း သစ်ပင်အပေါင်းတို့သည်။
အနေကေဟိ = အမျိုးအစား များလှစွာကုန်သော။
ဖလေဟိ = အသီးတို့နှင့်။
သမိဒ္ဓိဘူတာ = ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍။
ခုဒ္ဒံ = ခရီးသွားသူ ရှင်လူခပင်း ဆာလောင်ခြင်းကို၎င်း။
ပိပါသမ္ပိ = ခရီးသွားသူ ရှင်လူခပင်း ရေသိပ်ခြင်းကို၎င်း။
ဝိနောဒယန္တိ = ပယ်ဖျောက်နိုင်ကုန်၏။
သမယော = ဖွားရပ်ဌာနီ ပြည်ကပ္ပီသို့ နှစ်လီစက်ပန်း ကိုယ်တော်လှမ်း၍ ကြွမြန်းတော်မူရန် လျော်ကန်လျောက်ပတ် ကောင်းမြတ်သော အချိန်ပါဘုရား။
ဝိစိတ္တမာလာ = အဆန်းတကြယ် ရှုချင်ဖွယ်သော ပန်းနွယ်ပန်းညွန့် ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်း။
သုစိပလ္လဝေဟိ = ညစ်ကြေးမတွယ် စင်ကြယ်သော ရွက်ညွန့်တို့ဖြင့်။
သုသဇ္ဇိတာ = ကောင်းစွာစီရင် တန်းဆာဆင်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍။
မောရကလာပသန္နိဘာ = ဥဒေါင်းမြီးစည်း ပုံမှီးစံယူ တူကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်း။
(ရုက္ခာ = ဥတုအလျောက် ဖြစ်ပေါက်ကြကုန်သော သစ်ပင်တို့သည်။)
ဝိရောစမာနာ = ရှုတိုင်းအံ့ဖွယ် တင့်တယ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်း။
ဖလပလ္လဝေဟိ = သီးကင်းရွက်နု အစုစုတို့ဖြင့်။
သုသဇ္ဇိတာ = ကောင်းစွာစီရင် တန်းဆာဆင်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်း။
အဒ္ဓါနကိလန္တသတ္တေ = ခရီးပန်းသူ ရှင်ရှင်လူတို့ကို။
ဝါသနိဝါသဘူတာ = ကျောင်း အိမ်အလား နားနေတည်းခိုရာ ဖြစ်ကြကုန်၍၎င်း။
တောသေန္တိ = နှစ်သက်ရွှင်လန်း ဝမ်းမြောက်စေကုန်၏။
လတာ အနေကာ သုဝိရာဇမာနာ။
တောသေန္တိ သတ္တေ မဏိမဏ္ဍပါဝ၊
အနေကာ = အမျိုးအစား များလှစွာကုန်သော။
လတာ = နွယ်ပင်တို့သည်။
ဝနဂုမ္ဗနိဿိတာ = တောချုံတို့ဝယ် မှီတွယ်ရုံနွယ်ကြကုန်လျက်။
သုဖုလ္လိတဂ္ဂါ = ကားကားစွင့်စွင့် ပွင့်သော အညွန့်အဖျား ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍။
သုဝိရာဇမာနာ = ကြည့်ရှုချင်ဖွယ် လွန်စွာ တင့်တယ်ကြကုန်လျက်။
သတ္တေ = ခရီးသွားသူ ရှင်ရှင်လူတို့ကို။
မဏိမဏ္ဍပါဝ = ရောင်စုံခြယ်သတ် ကျောက်မျက်ရတနာ မဏ္ဍပ်ကဲ့သို့။
လတာ အနေကာ ဒုမနိဿိတာဝ၊
ပိယေဟိ သဒ္ဓိံ သဟိတာ ဝဓူဝ။
ပလောဘယန္တီ ဟိ သုဂန္ဓဂန္ဓာ၊
ပိယေဟိ = မေတ္တာသက်ဝင် ချစ်လင်တို့နှင့်။
သဟိတာ = ကိုယ်ချင်းယှဉ်လျက် တွဲဖက်နေကုန်သော။
ဝဓူဝ = အမျိုးကောင်းသမီး ချွေးမတို့ကဲ့သို့။
ဒုမနိဿိတာဝ = ချစ်လင်သဖွယ် သစ်ပင်၌ မှီတွယ်ကြကုန်လျက်သာလျှင်။
သုဂန္ဓဂန္ဓာ = ကောင်းသောရနံ့တို့ဖြင့် သင်းပျံ့ကြိုင်လှိုင်ကုန်သည်ဖြစ်၍။
ပလောဘယန္တိ = မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်အောင် သွေးဆောင်ဖြားယောင်းသည့်နှယ် တင့်တယ်ကြကုန်၏။
သမယော = ဖွားရပ်ဌာနီ ပြည်ကပ္ပီသို့ နှစ်လီစက်ပန်း ကိုယ်တော်လှမ်း ကြွမြန်းတော်မူရန် လျော်ကန်လျောက်ပတ် ကောင်းမြတ်သော အချိန်ပါဘုရား။
ဒိဇာ သမန္တာ အဘိကူဇမာနာ။
သမန္တာ = ဝန်းကျင်ပတ်ချာ ရှစ်မျက်နှာမှ။
ဒိဇာ = နှစ်ကြိမ်ပေါက်ဖွား ငှက်အများတို့သည်။
ဝိစိတ္တနီလာဒိမနုညဝဏ္ဏာ = ဆန်းကြယ်ရွှန်းစို အညိုစသော နှစ်သက်ဖွယ် အဆင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍။
အဘိကူဇမာနာ = နှစ်သက်ရွှင်မြူး ရင့်ကျူးတွန်မြည်ကြကုန်လျက်။
မဉ္ဇုဿရတာရတီဟိ = မြူးကွန့်ကျူးညံ သာယာသောအသံနှင့် မောင်နှံယှက်တွဲ ပျော်ပွဲဆင်ကြခြင်းတို့ဖြင့်။
ပထိကေ = ခရီးသွားသူ ရှင်ရှင်လူတို့ကို။
မိဂါ စ နာနာ သုဝိရာဇမာနာ၊
ဥတ္တုင်္ဂကဏ္ဏာ စ မနုညနေတ္တာ။
ဒိသာ သမန္တာ မဘိဓာဝယန္တိ၊
နာနာ = အမျိုးဇာတ်အား အထူးထူး အပြားပြားကုန်သော။
မိဂါစ = သားအပေါင်းတို့သည်လည်း။
သုဝိရာဇမာနာ စ = မြူးကွန့်စံပယ် တင့်တယ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်း။
ဥတ္တုင်္ဂကဏ္ဏာ စ = ကိုယ့်အဖော်နှင့် ပျော်သဖြင့်လျှင် စွင့်စွင့်စိုက်ဆောင် ထောင်သောနားရွက်ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်း။
မနုညနေတ္တာ စ = နှစ်သက်စဖွယ် ပြူးကျယ်သော မျက်စိရှိကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်း။
သမန္တာဒိသာ = ဝန်းကျင်ပတ်ချာ အရပ်ရှစ်မျက်နှာတို့သို့။
အဘိဓာဝယန္တိ = ခုန်ပေါက်ပြေးလွှား ကစားမြူးတူးကြကုန်၏။
Posted by LokaChantha at 11:26 PM 1 comment:
သေခါနီးအချိန်ကျတော့ ရုပ်ကလည်း အားနည်းလာပြီ၊ ဟဒယဝတ္ထုတို့ ဘာတို့က အားနည်းလာပြီ။
အဲဒီလို အားနည်းလာတဲ့အခါကျတော့ ဇောက ၇-ကြိမ်ထိအောင် မသွားနိုင်ဘူးတဲ့။ ၅-ကြိမ်ပဲ စောတယ်။
ရိုးရိုးအခါကတော့ ၇-ကြိမ် စောမယ်။
မရဏာသန္နဇောအခါမှာတော့ ၅-ကြိမ်၊ မြန်မာစကား အလောသုံးဆယ်ဆိုတာ ဒီ ၅-ကြိမ်ထဲက အလယ်သုံးဇောကို အလောသုံးဆယ်လို့ ပြန်ပြောတယ်ဆိုတာပဲ။
ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်။ ရိုးရိုး ၇-ကြိမ် မစောနိုင်ဘဲ ၅-ကြိမ်မှာ အလယ် ၃-ဇောဆိုတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြစ်တယ်ပေါ့။
ဇောပြီးရင် စုတိ၊ တစ်ခါတလေ ဇောပြီး ဘဝင်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ တဒါရုံဖြစ်နိုင်တယ်၊ ပြီး စုတိ။ စုတိပြီးရင်တော့ ပဋိသန္ဓေပဲ။ ပဋိသန္ဓေပြီးရင် ဘဝင် ၁၅-ကြိမ်, ၁၆-ကြိမ်၊ ပြီးတော့ မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း၊ နောက် ဇော ၇-ကြိမ်။ ဒါက တန်းဖြစ်မှာပဲ။ ဒါကတော့ ဘယ်လိုမှ တားလို့ မရဘူး။
ဘဝသစ်မှာ ဒီဇော ၇-ကြိမ်ကို ဘဝနိကန္တိဇောလို့ ခေါ်တယ်။
ဘဝကို တွယ်တာလိုက်တဲ့ ဇော။
ဒါကြောင့်မို့ လူတွေဟာ သတ္တဝါတွေဟာ ဘဝကို မလွှတ်နိုင်တာ။
စဖြစ်ကတည်းကိုက ဘဝတစ်ခုမှာ စဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီဇောဟာ (နိကန္တိလောဘပေါ့) လောဘဇောနဲ့ ဘဝကို အရင်းတည်လာကြတာ။
လူတွေဟာ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ဘဝကို တွယ်တာတာ။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် သင်ယူခဲ့ရသော ဆရာတော် အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသ၏ အပတ် ၂၀ မြောက် အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချချက်မှာ အထူး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသော အာရမ္မဏသင်္ဂဟပိုင်း အဆက် ဒွါရမှ လွတ်သော အာရုံများအကြောင်း ဖြစ်၏။
ဒွါရဝိမုတ်စိတ်မှာ ၆-ဒွါရမှ လွတ်သော ဥပေက္ခာသန္တီရဏ ၂ ပါး၊ ကာမာဝစရဝိပါက်စိတ် ၈ ပါး၊ မဟဂ္ဂုတ်ဝိပါက်စိတ် ၉ ပါး၊ ပေါင်း ၁၉ ပါးသော စိတ်များ ဖြစ်၏။
ဤ ၁၉ ပါးသော စိတ်တို့သည် ကိစ္စသင်္ဂဟအားဖြင့် ပဋိသန္ဓေကိစ္စ, ဘဝင်ကိစ္စ, စုတိကိစ္စ တပ်သော စိတ်များ ဖြစ်၏။
“ပဋိသန္ဓေ, ဘဝင်, စုတိ ကိစ္စတပ်သော ဒွါရဝိမုတ်စိတ် ၁၉ ပါးသည်
များသောအားဖြင့် အခြားမဲ့ လွန်ခဲ့ပြီးသော ဘဝဟောင်းက ဆဒွါရိက မရဏာသန္နဇောသည် ယူပေးအပ်သော
ပစ္စုပ္ပန်, အတိတ်, ပညတ်ဖြစ်သော ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ်ဟု သမုတ်အပ်သော အာရုံ ၆ ပါးကို
ဆဒွါရိက မရဏာသန္နဇော = ၆ ဒွါရမှာ ဖြစ်သော မရဏာသန္နဇော
ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ်တို့မှာ အနာဂတ် မရှိ။
ပစ္စုပ္ပန်၊ အတိတ်သာ ရှိ၏။ တစ်ခါတရံ ပညတ် (ပညတ်=ကာလသုံးပါးမှ လွတ်သော ကာလဝိမုတ်) ရှိ၏။
အထက်ပါစာပိုဒ် (ဒွါရဝိမုတ်စိတ်တို့ ပြုသော အာရုံ)၏ ဆိုလိုရင်းကို နားလည် သဘောပေါက်ရန် မရဏာသန္နဝီထိကို နားလည်ရန် လိုအပ်၏။
ဘဝတစ်ခု၏ အစ ပဋိသန္ဓေတည်ပြီးနောက် ဘဝင်များစွာ, ရိုးရိုးဝီထိများစွာ ဖြစ်၏။ နောက်ဆုံး သေခါနီးတွင် မရဏာသန္နဝီထိ ဖြစ်၏။
မရဏာသန္နဝီထိ အမျိုးမျိုးရှိရာ နားလည်လွယ်ရုံမျှသော ဝီထိ(စိတ်အစဉ်အတန်း)ဖြင့် လေ့လာကြရ၏။
အတီတဘဝင် (လွန်သွားသော ဘဝင်)
ဘဝင်္ဂစလန (လှုပ်သော ဘဝင်)
ဘဝင်္ဂုပစ္ဆေဒ (ပြတ်သော ဘဝင်)
ဘဝင် (၁၆) (တစ်ခါတရံ ၁၅ ကြိမ်သာ ဖြစ်၏၊)
“မရဏာသန္နဝီထိဆိုတာ သေတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တဲ့ စိတ်အစဉ်ပေါ့လေ။
နောက်ဆုံး သေပြီဆိုရင် … ပထမဆုံး ဘဝင်တွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက် အာရုံတစ်ခုခုက ဒွါရမှာ လာပြီး ထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါ နဂိုက အရှိန်နဲ့ လာနေတဲ့ ဘဝင်က တစ်ချက် လွန်သွားတယ်တဲ့။
ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုတော့ တအားပြေးလာတဲ့ လူဟာ ရပ်ချင်တဲ့နေရာမှာ မရပ်နိုင်ဘဲ ရှေ့လွန်သွားတာမျိုးနဲ့ တူတယ်။
လွန်သွားပြီးတော့ ဒုတိယအကြိမ်မှာ ဘဝင်လှုပ်သွားပြီး၊ တတိယခဏကျမှ ဘဝင်ပြတ်သွားတယ်။
အဲဒီတော့ အတီတဘဝင်ဆိုတာလည်း ဘဝင်ပဲ၊ ဘဝင်္ဂစလနဆိုတာလည်း ဘဝင်ပဲ၊ ဘဝင်္ဂုပစ္ဆေဒဆိုတာလည်း ဘဝင်ပဲ။ အဲဒီလို ဘဝင်စိတ် ၃-ခုပေါ့၊ လွန်သွားတာက တစ်ခု, လှုပ်ခါသွားတာက တစ်ခု, ပြတ်သွားတာက တစ်ခုပေါ့။ ဒါ … သူ့တစ်ခဏ တစ်ခဏ သွားတာပေါ့။
အဲဒီနောက် ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ် ဖြစ်တယ်။
နောက် ရူပါရုံကို မြင်တဲ့ စက္ခုဝိညာဏ်စိတ် ဖြစ်တယ်။
စုတိ ဖြစ်တယ်။ စုတိဆိုတာ သေတာ။
အဲဒီလို သွားတဲ့အခါ အဲဒီအချိန်အခါမှာ ကံ (အတိတ်က ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံ)၊
ဒါမှမဟုတ် ကမ္မနိမိတ် (ကံပြုစဉ် အခြံအရံ၊ ဥပမာ - ဒါနကုသိုလ်ပြုစဉ် လှူဖွယ်ပစ္စည်း၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် စသည်)၊
သို့မဟုတ် ဂတိနိမိတ် (ရှေ့ဖြစ်မည့် ဘဝ၏ အမှတ်အသား၊ ဥပမာ - နတ်သမီး, နတ်ဗိမာန် စသည်) သုံးခုအနက် တစ်ပါးပါး ထင်ပြီး၊ အာရုံပြုပြီး စုတိစိတ် ကျသွားတာနော်။
ကောင်းပြီ၊ အဲဒီတော့ ကံဆိုတာ ပစ္စုပ္ပန်လား, အတိတ်လား, အနာဂတ်လား?
အတိတ်နော်။ မျက်လုံးနဲ့ မြင်တာ မဟုတ်ဘူး။ နားနဲ့ ကြားတာ မဟုတ်ဘူး။
စိတ်ထဲမှာ ပေါ်တာ၊ မနောဒွါရမှာ။
ကမ္မနိမိတ်ကျတော့ အတိတ်သော်လည်းကောင်း၊ ပစ္စုပ္ပန်သော်လည်းကောင်း ၂-မျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။
အတိတ်တုန်းက ပြုခဲ့တဲ့ ကံရဲ့ အခြံအရံတွေ အခု ပြန်ပေါ်နိုင်တယ်။
အခု လောလောဆယ် ပြုတာတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်။
ဒွါရာအားဖြင့် ၆ ဒွါရအနက် တစ်ခုခုမှာ လာထင်နိုင်တယ်။
ဒွါရ ၆ ပါးမှာ ထင်နိုင်လို့ အာရုံအမျိုးအစား ၆ ပါး ရှိမယ်။
သားရဟန္တာ အရှင်သောဏမထေရ်ရဲ့ ဖခင် မုဆိုးကြီး၊ အသက်ကြီးတော့ ရဟန်းဝတ်ပေး၊ သေခါနီး ငရဲနိမိတ်ထင်လာလို့ အရှင်သောဏက ဘုရားစေတီမှာ ဖခင်ဦးဇင်းကြီးကို ပန်းတွေ လှူခိုင်း ကုသိုလ်ပြုခိုင်းလို့ နတ်ပြည်နိမိတ်ထင် စုတိစိတ်ကျပြီး နတ်ပြည်မှာ သွားဖြစ်၊ အရှင်သောဏက နတ်ပြည်ထိ လိုက်သွားပြီး တရားဆက်ဟောတာကြောင့် သောတာပန်လား ဘာလဲမသိဘူး ဖြစ်သွားတယ်။
ခု ဥပမာပေးထားတဲ့ မရဏာသန္နဝီထိက ပစ္စုပ္ပန်ရူပါရုံလို့ ပြထားတာကြောင့် ‘ကံ’ဟာ အာရုံ မဟုတ်ဘူး။ ကံက အတိတ်။
ပစ္စုပ္ပန်ရူပါရုံဆိုတာကြောင့် ကမ္မနိမိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဂတိနိမိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီမှာ ပစ္စုပ္ပန်ရူပါရုံဟာ ဘယ်အချိန်က စပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်သလဲ?
အတီတဘဝင်နဲ့ ပြိုင်ပြီးတော့ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်ပြီး စိတ်အစဉ်ကို လာထိခိုက်တယ်။
ဘဝင် တစ်ချက် လွန်သွားတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်ရူပါရုံဟာ အတီတဘဝင်နဲ့ ပြိုင်ပြီး ဖြစ်ပေမယ့် အတီတဘဝင်, ဘဝင်္ဂစလန, ဘဝင်္ဂုပစ္ဆေဒ ဒီဘဝင် ၃-ခုက ပစ္စုပ္ပန်အာရုံကို အာရုံမပြုဘူး။ ဟို နောက်တုန်းက ယူလာခဲ့တဲ့ ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ် (ဒီဘဝရဲ့ ပဋိသန္ဓေနဲ့ တူတာကိုသာ)ပဲ အာရုံပြုတယ်။
ခု သေခါနီး တွေ့လာတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ရူပါရုံကို ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းက စပြီးတော့ စိတ်တွေက အာရုံပြုလိမ့်မယ်။
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်း, စက္ခုဝိညာဏ်, သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းနဲ့ သွားတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်ရူပါရုံဟာ စိတ္တက္ခဏ ၁၇-ချက် ကြာရှည်တာကြောင့် အတီတဘဝင်ကနေ စပြီး ရေတွက်လိုက်ရင် ၁၄ မှာ စုတိ၊ ၁၅ မှာ ပဋိသန္ဓေ (နောင်)၊ ၁၆ - ဘဝင်၊ ၁၇ - ဘဝင်မှာ သူချုပ်လိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ဘဝသစ်မှာ ဖြစ်တဲ့ ပဋိသန္ဓေ၊ ပထမဘဝင်၊ ဒုတိယဘဝင်ဟာ ဒီပစ္စုပ္ပန်ရူပါရုံကို အာရုံပြုတယ်။
အဲဒီရူပါရုံဟာ ဒုတိယဘဝင်မှာ ချုပ်သွားတော့ နံပါတ် ၃ ဘဝင်က စပြီးတော့ ဒီဘက်ဘဝမှာ ဘဝင်ဟူသမျှဟာ အဲဒီ အတိတ်ရူပါရုံကို အာရုံပြုလိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့ ဒွါရဝိမုတ်စိတ် ၁၉ ပါးဟာ ဒီဘက်ဘဝသစ်မှာ ပဋိသန္ဓေရယ်၊ သူ့နောက်က ကပ်လိုက်လာတဲ့ ဘဝင်ရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ တစ်ဘဝလုံးမှာ ဖြစ်မယ့် ဘဝင်စိတ်တွေရယ်၊ တစ်ခါ ဘဝဆုံးတဲ့အခါ ဖြစ်မယ့် စုတိရယ် ကိစ္စတပ်ပြီး၊
ဘာမှ ကြားမှာ အခြားမရှိ ကပ်လျက်ဖြစ်တဲ့ ဘဝဟောင်းက မရဏာသန္နဇောယူတဲ့ အာရုံကို ယူတယ်။
အဲဒီလို ယူတဲ့အခါမှာ ပစ္စုပ္ပန်လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်တယ်။
ရူပါဝစရဘုံမှာ ဖြစ်တဲ့အခါတော့ ပညတ် ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။
အဲဒီ အာရုံကို ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ်လို့ ခေါ်တယ်။
ဘဝတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကာလအားဖြင့်ဆိုရင် ဘာမှ မခြားဘူး။ စိတ်ခဏအနေနဲ့ ဆက်တိုက်ပဲ။
ဌာနအားဖြင့်ဆိုရင် … ဆိုပါတော့ နတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အများကြီး ခြားသွားနိုင်တယ်။
မိလိန္ဒပဥှာမှာ ရှင်နာဂသိန်က မိလိန္ဒမင်းကြီးကို နီးတဲ့ မြို့တစ်မြို့နဲ့ ဝေးတဲ့မြို့တစ်မြို့ကို စဉ်းစားခိုင်းတဲ့ ဥပမာနဲ့ ရှင်းပြတယ်။
ပဋိသန္ဓေ, ဘဝင်, စုတိ ကိစ္စတပ်တဲ့ ဒွါရဝိမုတ်စိတ်တို့ရဲ့ အာရုံဟာ ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ် သုံးပါးတို့တွင် တစ်ပါးပါး ဖြစ်တယ်။
အာရုံအမျိုးအစားအားဖြင့် ၆-ပါး ဖြစ်တယ်။
ကံက ဓမ္မာရုံ၊ ကမ္မနိမိတ်က အာရုံ ၆-ပါး၊ ဂတိနိမိတ်က ရူပါရုံ၊ အားလုံးပေါင်းပြောလိုက်တော့ အာရုံ ၆-ပါး။
ဒီ ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ်ဟာ ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ အတိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ကာလဝိမုတ်ခေါ်တဲ့ ပညတ်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အနာဂတ်ဆိုတာတော့ မရှိဘူး။
ဘဝသစ် ပဋိသန္ဓေစိတ်ဟာ “အခြားမဲ့ လွန်ခဲ့ပြီးသော ဘဝဟောင်းက ဆဒွါရိက မရဏာသန္နဇောသည် ယူပေးအပ်သော” အာရုံကို ယူတာကြောင့် တစ်ဘဝနဲ့ တစ်ဘဝမှာ ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ်ဟာ မတူဘူး။
တစ်ဘဝတည်းမှာတော့ ပဋိသန္ဓေ, ဘဝင်, စုတိဟာ အာရုံတူတယ်။
သေခါနီးဇော = မရဏာသန္နဇောက အကုသိုလ်ကို အာရုံပြုနိုင်တယ်၊ ကုသိုလ်ကို အာရုံပြုနိုင်တယ်။ နာမည်အားဖြင့် ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ်ကို အာရုံပြုတယ်လို့ ပြောရတယ်။
မျက်စိလည်သွားရင် တစ်သံသရာလုံးမှာ ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ်ဟာ တစ်ခုတည်းလို့ ထင်သွားလိမ့်မယ်။
ဒီဘဝမှာ ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ် ယူတာကိုပဲ နောက်ဘဝကလည်း ယူ၊ နောက်ဘဝကလည်း ယူ၊ နောက်ဘဝကလည်း ယူတယ် ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
နောက် မရဏာသန္နဝီထိနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခု သတိထားဖို့က အင်္ဂလိပ်လို ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေမှာ စုတိက ပဋိသန္ဓေကို ဖြစ်စေတယ်လို့ ရေးလေ့ရှိကြတယ်။ အဲဒါဟာ ချော်နေတာ။
ပဋိသန္ဓေစိတ်ဟာ ဝိပါက်စိတ်၊ ကံရဲ့ အကျိုးဖြစ်တဲ့ စိတ်၊ ဇောအခိုက် ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်ကံ ဒါမှမဟုတ် အကုသိုလ်ကံက ဖြစ်စေတာ။ စုတိက ဖြစ်စေတာ မဟုတ်ဘူး။
ပဋိသန္ဓေကို ဖြစ်စေတာက ဘဝဟောင်းက ကံက ဖြစ်စေတာ။ ဇောနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့ ကံတွေ ရှိလိမ့်မယ်၊ ဟိုးနောက်နောက်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ ကံတွေ ရှိခဲ့မယ်၊ အခုပေါ်လာပြီး အဲဒီကံက ပဋိသန္ဓေကို ဖြစ်စေတာ။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီအာရမ္မဏသင်္ဂဟအနေနဲ့ နားလည်ဖို့ကတော့ အဲဒီ ဒွါရဝိမုတ်စိတ်လို့ ခေါ်တဲ့ ပဋိသန္ဓေစိတ်, ဘဝင်စိတ်, စုတိစိတ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပဋိသန္ဓေ, ဘဝင်, စုတိ ကိစ္စတပ်တဲ့ စိတ် ၁၉ ပါး။
ဒီ ၁၉ ပါးဟာ ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ် ၃-ပါးတို့တွင် တစ်ပါးပါးကို အာရုံပြုတယ်။
အဲဒီ ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ်ဆိုတာ အာရုံအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင် အာရုံ ၆-ပါးပဲ။
ရူပါရုံဖြစ်နိုင်တယ်.. သဒ္ဒါရုံဖြစ်နိုင်တယ် … စသည်ဖြင့်ပေါ့။
အဲဒီ ကံ, ကမ္မနိမိတ်, ဂတိနိမိတ်ဟာ ပစ္စုပ္ပန်, အတိတ်, ပညတ် ဖြစ်နိုင်တယ်။
အခြားမဲ့ လွန်ခဲ့ပြီးသော ဘဝဟောင်းက ဆဒွါရိက မရဏာသန္နဇော ယူပေးတတ်တဲ့ အာရုံကို ယူတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ရေးရေး နားလည်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်နော်။”
အဘိဓမ္မာသင်တန်းပြီးသောအခါ သင်တန်းသူ သင်တန်းသား တရားနာပရိတ်သတ်နည်းသည့်အပြင် တရားဟောကြားမည့် စိန်စည်ဆရာတော်မှာ အအေးမိနေသဖြင့် ဆရာတော်အားလည်း ယခုတစ်ပတ်တွင် အနားပေးပြီး ရှေ့အပတ်မှာသာ နှစ်ဆတိုး၍ ဟောကြားရန် လျှောက်ထားကြရလေသည်။
Posted by LokaChantha at 5:11 PM No comments:
စိတ်ကို ခွဲခြား ဝေဖန်ခြင်း (၄) - အာရမ္မဏသင်္ဂဟ
ဒီ‘အာရုံ’တွေက စိတ်ကလေးကို အမြဲမပြတ် ဝင်ရောက် နှောင့်ယှက်ပြီးတော့ နေတယ်။
ဒီ … စိတ်ကလေးကို ငြိမ်အောင် မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ လူတွေဟာ ယောက်ယက်ခတ်နေတယ်။
လူရော ရှင်ရော ရဟန်းရော လူကြီး လူငယ် အကုန်လုံးပဲ။
လူဟာ အလုပ်ကြောင့် ပင်ပန်းလာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ဘယ်လို လုပ်ကြသလဲ? … အလုပ်လုပ်လို့ မောပန်းလာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် တခါတည်း အိပ်ရာထဲဖြစ်ဖြစ် … တစ်နေရာမှာ လှဲပြီး ခြေပစ်လက်ပစ် … တခါတည်း လှဲပြီးတော့ အသက်ကလေး မှန်မှန် ရှူပြီးတော့ လျောင်းနေလိုက်တဲ့အခါ ကုန်သွားတဲ့ အားအင်တွေ ပြန်ပြီးတော့ တက်လာသလိုပဲ ခံစားလိုက်ရတယ်။ အဲဒါ ခန္ဓာကိုယ်ကို အပန်းဖြေခြင်း။
ထို့အတူပဲ စိတ်ကို အပန်းဖြေခြင်းဟာ ဘာလဲလို့ ဆိုလို့ရှိရင် ယောက်ယက်ခတ်နေတဲ့ စိတ်ကလေးကို ထိန်းချုပ်ပေးလိုက်တာပဲ။
အဲဒီဥစ္စာကို အင်္ဂလိပ်တွေက သူတို့ နားလည်သလို ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဒီ စိတ်ကလေးကို ငြိမ်သက်အောင် လုပ်တတ်တဲ့ လုပ်ငန်းလေးကို ကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ ခေါ်တယ် တဲ့။ ဘယ်လောက်ကောင်းထားလဲ။ အဲဒါဟာ အမှန်ပဲ။
ကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာ စိတ်ကလေးကို တခါတည်း တဖျတ်ဖျတ် လှုပ်ပြီးတော့ ပြာယာခတ်နေတဲ့ စိတ်ကလေးကို ငြိမ်ကျသွားအောင် လုပ်တဲ့ နည်းစနစ်ကို ကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ ခေါ်တယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့သည် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် တနင်္လာနေ့သည် Presidents Day ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ရာ အဘိဓမ္မာသင်တန်းကို ဖေဖောဝါရီလ ၁၃ ရက် စနေနေ့အစား ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် သင်ကြား ပို့ချ၏။
ရက်ရှည် ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ရာ ခရီးသွားသူများ၊ အချို့ တနင်္လာနေ့ ရုံးမပိတ်သူများကြောင့် သင်တန်းသား သင်တန်းသူ တစ်ဝက်ခန့် မတက်ရောက်နိုင်ကြပေ။
ယခုအပတ် သင်တန်းတွင် ၁၉ ပတ်နှင့် ၂၀ ပတ်မြောက် ပို့ချချက်များဖြစ်သော အာရမ္မဏသင်္ဂဟအကြောင်းကို သင်ယူ လေ့လာကြရရာ ရှေးဦးစွာ လောကချမ်းသာဆရာတော်က အာရမ္မဏသင်္ဂဟ ဆိုရိုးကို ရှင်းလင်း သင်ကြားသွားလေသည်။
အာရမ္မဏ (ပါဠိ) = အာရုံ (မြန်မာ)
အာရမ္မဏ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ (၁) စိတ်၏ မွေ့လျော်ရာ ဌာန၊ (၂) စိတ်၏ မှီတွယ်ရာ ပစ္စည်း ဟူ၍ နှစ်မျိုး ရ၏။
အာရုံအမျိုးအစား ၆ ပါး ရှိ၏။
၁။ ရူပါရုံ - မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သော အဆင်း
၂။ သဒ္ဒါရုံ - နားဖြင့် ကြားနိုင်သော အသံ
၃။ ဂန္ဓာရုံ - နှာခေါင်းဖြင့် သိနိုင်သော အနံ့
၄။ ရသာရုံ - ချို၊ ချဉ်၊ ဖန်၊ ခါး၊ စပ်၊ ငန် အရသာ
၅။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ - ခန္ဓာကိုယ်နှင့် တွေ့ထိနိုင်သော အတွေ့အထိ
၆။ ဓမ္မာရုံ - ပသာဒရုပ် ၅ ပါး၊ သုခုမရုပ် ၁၆ ပါး၊ စိတ် ၈၉ ပါး၊ စေတသိက် ၅၂ ပါး၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ်
ဤ အာရုံခြောက်ပါးအပြင် အာရမ္မဏသင်္ဂဟ၌ -
ကာမအာရုံ/ကာမတရား = ကာမစိတ် ၅၄၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈
မဟဂ္ဂုတ်အာရုံ/မဟဂ္ဂုတ်တရား = မဟဂ္ဂုတ်စိတ် ၂၇၊ စေတသိက် ၃၅
ပညတ်အာရုံ/ပညတ်တရား = ပညတ် ၂၈
လောကုတ္တရာအာရုံ/တရား = လောကုတ္တရာစိတ် ၈၊ စေတသိက် ၃၆၊ နိဗ္ဗာန်
ကာလဝိမုတ် = အတိတ် ပစ္စုပ္ပန် အနာဂတ် ကာလသုံးပါးမှ လွတ်သော တရား = နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ်
တို့ကိုလည်း ခွဲခြား မှတ်သားကြရ၏။
အာရုံပြုတတ်သော တရား/အာရုံကို ယူတတ်သော တရားကို ‘အာရမ္မဏိက’ ဟု ခေါ်၏။
အာရုံအပြုခံရသော တရားကို ‘အာရုံ’ ဟု ခေါ်၏။
(က) (ကာမတရားကို အာရုံပြု)
+ အာရုံပြုတတ်သော တရား - စက္ခုဝိညာဏ်စိတ် ၂ ခုသည် အာရုံအပြုခံတရား - ပစ္စုပ္ပန် ရူပါရုံကို အာရုံပြု၏။
+ သောတဝိညာဏ်စိတ် ၂ ပါးသည် ပစ္စုပ္ပန် သဒ္ဒါရုံကို အာရုံပြု၏။
+ ဃာနဝိညာဏ်စိတ် ၂ ပါးသည် ပစ္စုပ္ပန် ဂန္ဓာရုံကို အာရုံပြု၏။
+ ဇိဝှါဝိညာဏ်စိတ် ၂ ပါးသည် ပစ္စုပ္ပန် ရသာရုံကို အာရုံပြု၏။
+ ကာယဝိညာဏ်စိတ် ၂ ပါးသည် ပစ္စုပ္ပန် ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံကို အာရုံပြု၏။
(ရူပါရုံ၊ သဒ္ဒါရုံ၊ ဂန္ဓာရုံ၊ ရသာရုံ၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံတို့ကို အကျဉ်းခေါ်သော် ‘ပဉ္စာရုံ’ ဟု ခေါ်၏၊)
(ခ) (ကာမတရားကို အာရုံပြု)
+ မနောဓာတ် ၃ ပါး (ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်း၊ သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း ဒွေး) သည် ပစ္စုပ္ပန် ပဉ္စာရုံကို အာရုံပြု၏။
(ဂ) (ကာမတရားကို အာရုံပြု)
+ သန္တီရဏစိတ် ၃၊ ဟသိတုပ္ပါဒ် ၁၊ ကာမာဝစရ၀ိပါက်စိတ် ၈၊ စုစုပေါင်း ၁၂ ပါးသော စိတ်တို့သည် ကာမတရား/ကာမအာရုံ (ကာမစိတ် ၅၄၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈) ကို အာရုံပြု၏။
(ဃ) (ကာမတရား/မဟဂ္ဂုတ်တရား/ပညတ်တို့ကို အာရုံပြု)
+ အကုသိုလ်စိတ် ၁၂၊ ဉာဏဝိပ္ပယုတ် ကာမာဝစရကုသိုလ်စိတ် ၄၊ ဉာဏဝိပ္ပယုတ် ကာမာဝစရ ကြိယာ ၄၊ စုစုပေါင်း ၂၀ သောစိတ်တို့သည် လောကီစိတ် ၈၁၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈၊ ပညတ် တို့ကို အာရုံပြု၏။ (လောကုတ္တရာမှအပ လောကီတရားအားလုံးကို အာရုံပြု၏။)
(င) (ကာမတရား/မဟဂ္ဂုတ်တရား/ပညတ်/နိဗ္ဗာန်တို့ကို အာရုံပြု)
+ ဉာဏသမ္ပယုတ် ကာမာဝစရ ကုသိုလ် ၄၊ ကုသိုလ်အဘိဉာဏ် ၁၊ ပေါင်း ၅ ပါးသည် အရဟတ္တမဂ်၊ ဖိုလ် ကြဉ်သော စိတ် ၈၇၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ်တို့ကို အာရုံပြု၏။
(အဘိဉာဏ် = အထူးပွားများအပ်သော ပဉ္စမဈာန်)
(စ) (ကာမတရား/မဟဂ္ဂုတ်တရား/နိဗ္ဗာန်/ပညတ်တို့ကို အာရုံပြု)
+ ဉာဏသမ္ပယုတ် ကာမာဝစရကြိယာ ၄၊ ကြိယာအဘိဉာဏ် ၁၊ ဝုဋ္ဌော ၁၊ ပေါင်း ၆ ပါးသည် စိတ် ၈၉၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ် အာရုံအားလုံးကို အာရုံပြု၏။
(ဆ) (မဟဂ္ဂုတ်တရားကို အာရုံပြု)
+ ဒုတိယနှင့် စတုတ္ထ အရူပါဝစရစိတ် ၆ ပါးသည် မဟဂ္ဂုတ်တရားကို အာရုံပြု၏။
(ဇ) (ပညတ်တရားကို အာရုံပြု)
+ ရူပါဝစရစိတ် ၁၅၊ ပထမနှင့် တတိယ အရူပါဝစရ ၆၊ ပေါင်း ၂၁ ပါးသည် ပညတ်တရားကို အာရုံပြု၏။
(ဈ) (နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြု)
+ လောကုတ္တရာစိတ် ၈ ပါးသည် နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြု၏။
ဧကန် အာရုံပြုခြင်း နှင့် အနေကန် အာရုံပြုခြင်း
ကာမတရားတစ်ခုတည်း သက်သက်၊ သို့မဟုတ် မဟဂ္ဂုတ်တရားတစ်ခုတည်း သက်သက်၊ သို့မဟုတ် ပညတ်တရားတစ်ခုတည်း သက်သက်၊ သို့မဟုတ် နိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်း သက်သက်သာ အာရုံပြုခြင်းကို ‘ဧကန်အာရုံပြုခြင်း’ဟု ခေါ်၏။
ကာမတရားလည်းပါ၊ တခြားသော တရားများလည်း ပါသော အာရုံပြုခြင်းကိုမူ ‘အနေကန်အာရုံပြုခြင်း’ဟု ခေါ်၏။
ကာမတရားကို ဧကန် အာရုံပြုသော စိတ် = ၂၅ (က-၁၀ + ခ-၃ + ဂ-၁၂ = ၂၅)
ကာမတရားကို အနေကန် အာရုံပြုသော စိတ် = ၃၁ (ဃ-၂၀ + င-၅ + စ-၆ = ၃၁)
မဟဂ္ဂုတ်တရားကို ဧကန် အာရုံပြုသော စိတ် = ၆ (ဆ-၆)
မဟဂ္ဂုတ်တရားကို အနေကန် အာရုံပြုသော စိတ် = ၃၁ (ဃ-၂၀ + င-၅ + စ-၆ = ၃၁)
ပညတ်တရားကို ဧကန် အာရုံပြုသော စိတ် = ၂၁ (ဇ-၂၁)
ပညတ်တရားကို အနေကန် အာရုံပြုသော စိတ် = ၃၁ (ဃ-၂၀ + င-၅ + စ-၆ = ၃၁)
နိဗ္ဗာန်ကို ဧကန် အာရုံပြုသော စိတ် = ၈ (ဈ-၈)
နိဗ္ဗာန်ကို အနေကန် အာရုံပြုသော စိတ် = ၁၁ (င-၅ + စ-၆ = ၁၁)
အပြန်အားဖြင့်ဆိုသော် (စိတ် ၈၉/၁၂၁ ဇယားကို ကြည့်၍ အာရုံကို ခွဲခြားဝေဖန်သော်)-
+ အကုသိုလ်စိတ် (၁၂ ပါး) သည် လောကုတ္တရာမှတပါး လောကီစိတ် ၈၁၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ်၊ ပညတ်တို့ကို အာရုံပြု၏။
+ အဟိတ်စိတ် (၁၈ ပါး)မှ
စက္ခုဝိဉာဏ်ဒွေးသည် ပစ္စုပ္ပန်ရူပါရုံကို အာရုံပြု၏။
သောတဝိဉာဏ်ဒွေးသည် ပစ္စုပ္ပန်သဒ္ဒါရုံကို အာရုံပြု၏။
ဃာနဝိဉာဏ်ဒွေးသည် ပစ္စုပ္ပန်ဂန္ဓာရုံကို အာရုံပြု၏။
ဇိဝှါဝိဉာဏ်ဒွေးသည် ပစ္စုပ္ပန်ရသာရုံကို အာရုံပြု၏။
ကာယဝိဉာဏ်ဒွေးသည် ပစ္စုပ္ပန်ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံကို အာရုံပြု၏။
သမ္ပဋိစ္ဆိုန်းဒွေးသည် ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ ၅-ပါးကို အာရုံပြု၏။
သန္တီရဏ ၃-ပါးသည် ကာမစိတ် ၅၄၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈ ကို အာရုံပြု၏။
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းသည် ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ ၅-ပါးကို အာရုံပြု၏။
မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း (ဝုဋ္ဌော)သည် စိတ် ၈၉၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ် (အာရုံအားလုံး)ကို အာရုံပြု၏။
ဟသိတုပ္ပါဒ်သည် ကာမစိတ် ၅၄၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈ ကို အာရုံပြု၏။
+ ကာမာဝစရသောဘန (၂၄ ပါး)မှ
ဉာဏသမ္ပယုတ် ကာမာဝစရကုသိုလ်စိတ် ၄-ပါးသည် အရဟတ္တမဂ်ဖိုလ်ကြဉ် စိတ် ၈၇၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ်ကို အာရုံပြု၏။
ဉာဏဝိပ္ပယုတ် ကာမာဝစရကုသိုလ်စိတ် ၄-ပါးသည် လောကီစိတ် ၈၁၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈၊ ပညတ်ကို အာရုံပြု၏။
ကာမာဝစရဝိပါက်စိတ် ၈-ပါးသည် ကာမစိတ် ၅၄၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈ ကို အာရုံပြု၏။
ဉာဏသမ္ပယုတ် ကာမာဝစရကြိယာစိတ် ၄-ပါးသည် စိတ် ၈၉၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ် (အာရုံအားလုံး)ကို အာရုံပြု၏။
ဉာဏဝိပ္ပယုတ် ကာမဝစရကြိယာစိတ် ၄-ပါးသည် လောကီစိတ် ၈၁၊ စေတသိက် ၅၂၊ ရုပ် ၂၈၊ ပညတ်ကို အာရုံပြု၏။
+ ရူပါဝစရကုသိုလ်စိတ် ၅-ပါး၊ ရူပါဝစရဝိပါက်စိတ် ၅-ပါး၊ ရူပါဝစရကြိယာစိတ် ၅-ပါး၊ ပေါင်း ၁၅-ပါးတို့သည် ပညတ်ကို အာရုံပြု၏။
+ အရူပါဝစရစိတ် ၁၂-ပါးအနက်
ပထမစိတ် (အာကာသာနဉ္စာယတနစိတ်) ၃-ပါးသည် ပညတ်ကို အာရုံပြု၏။
ဒုတိယစိတ် ၃-ပါးသည် မဟဂ္ဂုတ်တရားကို အာရုံပြု၏။
တတိယစိတ် ၃-ပါးသည် ပညတ်ကို အာရုံပြု၏။
စတုတ္ထစိတ် ၃-ပါးသည် မဟဂ္ဂုတ်ကို အာရုံပြု၏။
+ လောကုတ္တရာစိတ် ၈/၄၀ သည် နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြု၏။
ဒွါရမှ လွတ်သော စိတ်များ
ဒွါရမှ ရံခါလွတ်သော စိတ် ၁၀ (ဥပေက္ခာ သန္တီရဏ ၂ နှင့် ကာမာဝစရဝိပါက်စိတ် ၈) (ပဋိသန္ဓေ, ဘဝင်, စုတိ ကိစ္စတပ်သောအခါ) + အမြဲတမ်းလွတ်သော စိတ် ၉ (မဟဂ္ဂုတ်ဝိပါက်စိတ် ၉)၊ ပေါင်း ၁၉-ခုသည် ကံ သို့မဟုတ် ကမ္မနိမိတ် သို့မဟုတ် ဂတိနိမိတ်ကို အာရုံပြု၏။
Posted by LokaChantha at 11:39 AM No comments:
စိတ်ကို ခွဲခြား ဝေဖန်ခြင်း (၃) - ဒွါရသင်္ဂဟ
ဆရာဇေ။ ။ ဘယ်သူမှ မရောက်ကြသေးဘူးလား ဆရာစော?
ဆရာစော။ ။ ကဖိုးထိန်ကတော့ ဒီနေ့ မအားဘူး ပြောတယ်။ ဆားပုလင်းကတော့ ဆရာချာကို မပါ,ပါအောင် ခေါ်လာမယ် ပြောတယ်။ အေဘီဘီအေ လပတ်အစည်းအဝေးကို ခေါ်လာတာ အားမရသေးတော့ ဒီကိုပါ ရအောင် ခေါ်လာမယ်ဆိုပြီး အစည်းအဝေး ပြီးကတည်းက နှစ်ယောက် အတူထွက်သွားကြတာပဲ။ ဟော … ပြောရင်း ဆိုရင်း ရောက်လာကြပါပြီ။
ဆားပုလင်း။ ။ ဆရာချာက အစားအသောက် ပါမှ … ကောင်းမှ လိုက်မယ် ပြောနေလို့ ကိုယ့်ဘာသာပဲ တရုတ်တန်းက မုန့်တွေ ဝင်ဝယ်ခဲ့သေးတယ်။
ဆရာချာ။ ။ ဆိုင်က လက်ရာက ဆရာစော လက်ရာကို မမီပါဘူး။
ဆရာစော။ ။ ဒီမှာ ဘယာကြော်နဲ့ ဆမူဆာကြော် လုပ်ထားပါတယ်ဗျ။
ဆားပုလင်း။ ။ ဆရာဇေ … အဘိဓမ္မာသဘောတွေ တော်တော် နောကျေနေပြီနဲ့ တူတယ်။ စနေနေ့က သင်တန်းအကြောင်း ပြောပြပါအုန်း။
ဆရာဇေ။ ။ ကြားထဲမှာ ခရီးသွားနေ … သင်တန်းအဆက်ပြတ်သွားတော့ နားလည်သလိုလို နားမလည်သလိုလိုပဲဗျ။
ဆရာချာ။ ။ အဘိဓမ္မာသင်တန်းက ဘယ်အပိုင်းကို ရောက်နေပြီလည်းဗျ။
ဆရာစော။ ။ ဆရာချာက ငယ်စဉ် ကိုရင်ဘဝကတည်းက သင်္ဂြိုဟ်ကို ကျေညက်ခဲ့ပြီးသား …။
ဆရာဇေ။ ။ ဒီတစ်ပတ် ၂၀၁၀ ခု ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက် စနေနေ့သင်တန်းက ၁၈ ပတ်မြောက်ဗျ။ ပကိဏ်းပိုင်းက ဒွါရသင်္ဂဟအကြောင်း သင်ယူကြရတယ်။
ဆားပုလင်း။ ။ ကဲ ဆရာချာ … နားလည်သလိုလို မလည်သလိုလို ဆရာဇေကို ရှင်းပြလိုက်စမ်းပါ။
ဆရာချာ။ ။ သင်ထားတာ ကြာနေပြီဆိုတော့ ပြန်မနွှေးဘဲနဲ့ ဘယ်ရမှာလည်း ဆားပုလင်း။ ခင်ဗျားပဲ ရှင်းပြမှ ဖြစ်မှာပေါ့။
ဆားပုလင်း။ ။ ကျွန်တော်လည်း မှတ်စုလေးတွေ ကြည့်ပြီး ပြန်ရှင်းပြရတာပါဗျာ။ အဟိတ်စိတ်တွေ သင်ရတုန်းက တံခါးခြောက်ပေါက်ဆိုတာ မှတ်မိသေးတယ်မဟုတ်လား ဆရာဇေ။
ဆရာဇေ။ ။ ‘မျက်စိ’၊ ‘နား’၊ ‘နှာ’၊ ‘လျှာ’၊ ‘ကိုယ်’၊ ‘စိတ်’ တံခါးခြောက်ပေါက်ကို ပြောတာ မဟုတ်လား။
ဆားပုလင်း။ ။ အမှန်ပေါ့ ဆရာဇေ။ ဒွါရဆိုတာ တံခါး။ အပေါက်ဝလို့လည်း သုံးတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မတင့်တယ်ပုံကို နှလုံးသွင်းတဲ့အခါ ဒွါရကိုးပေါက်က အညစ်အကြေးတွေ စွန့်ပစ်ရတာ ဆင်ခြင်ရတာ မဟုတ်လား။ ဒီမှာတော့ စက္ခုဒွါရ၊ သောတဒွါရ၊ ဃာနဒွါရ၊ ဇိဝှါဒွါရ၊ ကာယဒွါရ၊ မနောဒွါရ - တံခါးခြောက်ပေါက်မှာ ဖြစ်တဲ့ စိတ်တွေကို ခွဲခြား ဝေဖန်ရတာပေါ့။
စက္ခုဒွါရဆိုတာ စက္ခုပသာဒ = မျက်စိအကြည်ဓာတ် = မျက်လုံးသူငယ်အိမ် အလယ်နားမှာ ရှိတယ်။
သောတဒွါရ = သောတပသာဒ = နားအကြည်ဓာတ် = နားထဲ လက်စွပ်ကွင်းလေးနဲ့ တူတယ်။
ဃာနဒွါရ = ဃာနပသာဒ = နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ် = နှာခေါင်းထဲ ဆိတ်ခွာနဲ့ တူတယ်။
ဇိဝှါဒွါရ = ဇိဝှါပသာဒ = လျှာအကြည်ဓာတ် = လျှာပေါ်မှာရှိပြီး ကြာဖတ်ဖျားနဲ့ တူတယ်။
ကာယဒွါရ = ကာယပသာဒ = ကိုယ်အကြည်ဓာတ် = တစ်ကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့ပြီး တည်တယ်။
မနောဒွါရ = ဘဝင်စိတ် = မနောအကြည်ဓာတ်
ဒီ ဒွါရ ၆ ပါးနဲ့ စိတ်အကျဉ်း ၈၉၊ အကျယ် ၁၂၁ ပါးကို ခွဲခြား ဝေဖန်တာ။ စက္ခုဒွါရမှာ ဘယ်စိတ်တွေ ဖြစ်သလဲ၊ စိတ်ပေါင်း ဘယ်လောက် ဖြစ်နိုင်သလဲ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ဆရာစော။ ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ မျက်စိတံခါးပေါက်ကနေ ဘာစိတ်တွေ ဖြစ်သလဲ ဆားပုလင်း?
ဆားပုလင်း။ ။ စက္ခုဒွါရမှာ စိတ်ပေါင်း ၄၆ ပါး ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်း = ၁
စက္ခုဝိညာဏ် = ၂
သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း = ၂
ဥပေက္ခာ သန္တီရဏ = ၂
သောမနဿ သန္တီရဏ = ၁
ဝုဋ္ဌော (သို့မဟုတ်) မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း = ၁
ကာမာဝစရဇော = ၂၉
ကာမာဝစရဝိပါက် = ၈
စုစုပေါင်း ၄၆ ပါး။
ဆရာဇေ။ ။ ဒီမှာ နည်းနည်း မျက်စိလည်သလိုလိုပဲ ဆားပုလင်း။
ဆားပုလင်း။ ။ လည်သလိုလို ရှိနိုင်ပါတယ် ဆရာဇေ။ ဆရာဇေက ကြားမှာ သင်တန်းအဆက်ပြတ်နေတာလည်း ပါတယ်။ ရှေးက စိတ် စေတသိက်တွေ မကျေညက်ခဲ့လို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်ပြီး ‘ဇော’ဆိုပြီး စိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ရေတွက်ပြလိုက်တာ ပါလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဇောစိတ် ၅၅ ပါးကို ကိစ္စသင်္ဂဟမှာ ပြခဲ့တာ ဆရာဇေ မတက်လိုက်ရဘူး ဖြစ်မယ်။
ကာမာဝစရဇော ၂၉ ပါးဆိုတာ -
စုစုပေါင်း ၂၉ ပါးကို ကာမာဝစရဇော ၂၉ ပါးလို့ ခေါ်တယ်။
မဟဂ္ဂုတ်ကုသိုလ်စိတ် ၉ ပါး + မဟဂ္ဂုတ်ကြိယာစိတ် ၉ ပါး + လောကုတ္တရာစိတ် ၈ ပါး = စုစုပေါင်း ၂၆ ပါးကိုတော့ အပ္ပနာဇော ၂၆ ပါးလို့ ခေါ်တယ်။ ဒီစိတ် ၂၆ ပါးကတော့ မနောဒွါရမှာသာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဆရာဇေ။ ။ အမှန်ပဲပေါ့ ဆားပုလင်းရာ။ ရှေးက သင်ခဲ့တာတွေ မကျေညက်တာရော၊ သင်တန်းအဆက်ပြတ်သွားတာရောဆိုတော့ နားမလည်တာ အမှန်ပဲ။
ဆရာချာ။ ။ သောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှါ၊ ကာယဒွါရမှာ ဖြစ်တဲ့ စိတ်တွေအတွက် စက္ခုဝိညာဏ် ၂-ခု နေရာမှာ သောတဝိညာဏ် ၂-ခု၊ ဃာနဝိညာဏ် ၂-ခု၊ ဇိဝှါဝိညာဏ် ၂-ခု၊ ကာယဝိညာဏ် ၂-ခု အစားထိုးလိုက်ရုံပါပဲ။ သူတို့လည်း ၄၆ ပါးစီ ဖြစ်နိုင်တာပဲ မဟုတ်လား ဆားပုလင်း။
ဆားပုလင်း။ ။ ဟုတ်တာပေါ့ ဆရာချာ။ ဆရာချာက မှတ်မိတာ မြန်သားပဲ။
ဆရာစော။ ။ မနောဒွါရမှာကော … ။
ဆားပုလင်း။ ။ မနောဒွါရကျတော့ -
စုစုပေါင်း ၆၇ ပါး။
အဲဒီမှာ ကိစ္စသင်္ဂဟနဲ့ ပြန်ကောက်လိုက်ရင် -
ဥပေက္ခာသန္တီရဏ ၂ + သောမနဿသန္တီရဏ ၁ + ကာမာဝစရဝိပါက် ၈ = တဒါရုံ ၁၁
ကာမာဝစရဇော ၂၉ + အပ္ပနာဇော ၂၆ = ဇော ၅၅ ဆိုတော့
မနောဒွါရမှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ စိတ်ကို မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း ၁ + တဒါရုံ ၁၁ + ဇော ၅၅ = ပေါင်း ၆၇ ပါးလို့လည်း ဆိုလို့ရတာပေါ့။
ပဋိသန္ဓေ၊ ဘဝင်၊ စုတိ ကိစ္စတပ်တဲ့ စိတ် ၁၉ ပါးကတော့ အဲဒီကိစ္စတပ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ဘယ်ဒွါရကိုမှ အမှီမပြုဘဲ ဖြစ်တာကြောင့် ဒွါရမှ လွတ်တဲ့ ဒွါရဝိမုတ္တ (ဝိမုတ္တ = လွတ်ခြင်း) လို့ ခေါ်တယ်။
ဒီ ၁၉ ပါးက ကိစ္စသင်္ဂဟကို မှတ်မိရင် သိမယ်။
ဥပေက္ခာသန္တီရဏ ၂ + မဟာဝိပါက် ၈ + မဟဂ္ဂုတ်ဝိပါက် ၉ = ၁၉
စက္ခုဒွါရ၊ သောတဒွါရ၊ ဃာနဒွါရ၊ ဇိဝှါဒွါရ၊ ကာယဒွါရ = ဒွါရ ၅ ပါးမှာ ဖြစ်နိုင်သော စိတ်
ဒွါရတစ်ပါးစီ၌ စိတ် ၄၆ ပါးစီ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီ ၄၆ ပါးအနက် ၄၄ ပါးက ဒွါရတိုင်းမှာ အတူတူပဲ။ တူတာ ယူပြီးသားကို ထပ်မယူဘဲ ရေတွက်ရင် -
၄၄ + စက္ခုဝိညာဏ် ၂ + သောတဝိညာဏ် ၂ + ဃာနဝိညာဏ် ၂ + ဇိဝှါဝိညာဏ် ၂ + ကာယဝိညာဏ် ၂ = ၅၄ ပါး
ကာမစိတ် ၅၄ ပါးပဲပေါ့။
ဒွါရကနေ စိတ်ကို ယူပြီးတဲ့နောက် စိတ်ကနေ ဒွါရကို ပြန်ယူတဲ့ အချုပ်ကိုတော့ ကျွန်တော့မှတ်စုကိုပဲ ဆက်ဖတ်ပြလိုက်တော့မယ်ဗျာ။ ဘယ်စိတ်တွေက ဘယ်ဒွါရဆိုတာ ဆရာတော်ရဲ့ ဇယားထဲမှာ ပါ,ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဒွါရ၌ဖြစ်သော စိတ် ၃၆ ပါး
၅ ဒွါရ၌ ဖြစ်သော စိတ် ၃ ပါး
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဖန်းနဲ့ သမ္ပဋိစ္ဆိုန်းဒွေးကို “မနောဓာတ်”လို့ ခေါ်တယ်။
၆ ဒွါရ၌ဖြစ်သော စိတ် ၃၁ ပါး
ဒွါရ ၆ ပါးတစ်လှည့်၊ ဒွါရဝိမုတ်တစ်လှည့် ဖြစ်သော စိတ် ၁၀ ပါး
ဒွါရဝိမုတ်သက်သက်ဖြစ်သော စိတ် ၉ ပါး
မဟဂ္ဂုတ်ဝိပါက် ၉ (ခြောက်ဒွါရမှ လွတ်သည်။)
အားလုံး ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင် ၃၆ + ၃ + ၃၁ + ၁၀ + ၉ = ၈၉ ပါး ရတယ်။
ဆရာဇေ။ ။ ကျေးဇူးပါပဲ ဆားပုလင်း။ အထပ်ထပ် အခါခါ ဖတ်လိုက် မှတ်လိုက် နားထောင်လိုက်နဲ့ဆိုတော့ တဖြည်းဖြည်း ပိုပြီး နားလည် မှတ်မိလာပါတယ်။
ဆရာစော။ ။ ကဲ … ဘယာကြော်နဲ့ ဆမူဆာကြော်တွေတောင် အတော် အေးသွားရော့မယ်။ စားကြပါအုန်း။ အချဉ်ရည်လေးလည်း ကောင်းကောင်းလုပ်ထားတယ်။ ဟိုဘက်မှာ ရေနွေးကြမ်း။ စားကြ သောက်ကြပါအုန်း။
Posted by LokaChantha at 4:18 PM No comments:
စိတ်ကို ခွဲခြား ဝေဖန်ခြင်း (၂) - ကိစ္စသင်္ဂဟ